Kutarisa kune dambudziko reOthipron muchiedza chegakava (column 457) - Rabbi Michael Avraham
Kutarisa kuOthipron Dilemma muchiedza cheGakava (Koramu 457)
80 makomendi	/ L. Adar A. 03 - 03/2022/XNUMX 03 / 03 / 2022
Muchikamu chakapfuura ndakapa nharo pakati pangu naDavid Enoch (ona Here Kurekodhwa) pamubvunzo wekuti Mwari anodiwa sechikonzero chechokwadi chetsika (kana: Pasina Mwari zvinhu zvese zvinotenderwa). Mukati mekukurukurirana, mutungamiriri (Jeremy Fogel) akasimudza dambudziko reOthipron, uyo pachiso chayo aiita seasina kubatana nehurukuro. Mushure mechinguva ndakayeuchidzwa nezvebhuru 278 Ndakatobata nedambudziko uye zvarinoreva kune humbowo kubva kuhunhu (kurembera kwetsika pana Mwari). Muhurukuro iri pamusoro apa ndapindura mubvunzo muchidimbu, uye pano ndichadzokera kunyaya iyi kuitira kuti ndijekese kubatana kwayo kune gakava naEnoki uye kurodza misiyano yandakaita ipapo uye muchikamu chakapfuura.
Zvakakosha kwandiri kuti nditange nekucherechedza kuti pfungwa yaMwari yandinobata nayo mutsara uyu haisi iyo yakafanana naMwari "akaonda" wandakataura naye muchikamu chakapfuura. Mamwe emazano andinoita pano ndewewedzero isiri chikamu che "kuonda" kunodikanwa naMwari kuti ape simba kumitemo yetsika. Ini ndichadzokera kune ino nguva pakupera kwekoramu.
Muhurukuro yaPlato A. Eitifron Mubvunzo unotevera unobvunzwa: Chakanaka chakanaka here nekuti vanamwari vanochida, kana kuti vanamwari vanoda chakanaka nekuti chakanaka. Mune mamwe mazwi, mubvunzo ndewekuti kune chinangwa chechinangwa kune chakanaka here, kana kuti chinoita kuti zvive zvakanaka isarudzo yevamwari, asi kusvika pamwero wakafanana vanogona kusarudza kuti chero humwe hunhu hwakanaka kana hwakashata. Zvinhu zvose zvakatsaurirwa kune zvavanoda. Mubvunzo wakafanana unogona kumutswawo maererano naGd, naAvi Sagi naDaniel Statman, mubhuku ravo. Chitendero netsika, Bata nhaurirano yakadzama yenyaya. Mhedziso yavo ipapo ndeyekuti vangangove vese vanofunga vechiJudha vanotsigira sarudzo yekupedzisira. Ini handisi kuzopinda mune ese nuances uye nharo dzinomuka mubhuku riri pamusoro apa zvakajairika (ndinofunga kuti pane zvimwe zvisirizvo mairi), uye ini ndichazvivharira pachangu muchidimbu mhedziso yechikonzero chekutanga mativi ese.
Kune rumwe rutivi, muzvidzidzo zvouMwari tinofungidzira kuti Mwari ane masimba ose uye haana pasi pechinhu chipi nechipi. hakuna vamwe kunze kwake. Akasika nyika uye akaisa mitemo inotonga mairi. Zvazvinoreva ndezvekuti angadai akazvisarudza neimwe nzira yaaifunga. Nokudaro hapana chinangwa chechinangwa kune chakanaka nechakaipa. Ukuwo, kana munhu akatora maonero aya, mhedziso ndeyokuti hazvibviri kutaura kuti Mwari akanaka. Chirevo chokuti Mwari akanaka chinofungidzira kuti kune chakanaka chinotsanangurwa pasinei nezvake, uye nharo ndeyokuti pane kuenzana pakati pemafambiro ake uye zvaanoda uye chinangwa chimwe chete chechinangwa chakanaka. Asi kana chiri chisarudzo chake chinotsanangura pfungwa yezvakanaka, saka chirevo chokuti Mwari akanaka hachisi chinhu kunze kwetsanangudzo yetautological (kana analytical theorem) uye kwete nharo. Zvinoreva kuti: Mwari anoda zvaanoda. Asi izvi ndezvechokwadi kwatiri tose.
Vazhinji vezvidzidzo zvebhaibheri (uye kunyangwe mudiki ane hudyire anobatana navo) vanowanzofunga kuti iyi inzvimbo ine dambudziko. Mwari akanaka zvechokwadi uye haaigona kudaro. Izvi zvechokwadi zvinotora kuti zvakanaka zvinotsanangurwa zvine mutsindo uye Mwari pachake ari pasi petsanangudzo iyi. Zvirokwazvo aigona kudai akativhiringa ndokupofumadza meso edu kuti asasiyanise pakati pechakanaka nechakaipa, asi aisagona neimwe nzira kuziva chakanaka nechakaipa. Sezvandambotaura, kunyangwe kuoma kwezvidzidzo zvebhaibheri, zvinoita sekunge vazhinji vanofunga nezvepfungwa dzechiJudha vanobata nzira yechipiri.
Kunzwisisa uye kudzidzisa
Pfungwa yekutanga inogona kunatswa zvishoma, uye kuumbwa seizvi: Tine fungidziro yezvakanaka nezvakaipa. Nharo ndeyokuti kuda kwaMwari kunopindirana nemafungiro akafanana. Asi iyi intuition yakasimwa matiri naye, saka hapana chaicho chinangwa chezvakanaka nezvakaipa. Nokudaro zvinogona kutaurwa kuti chirevo ichi ndeyechokwadi (uye kwete tsanangudzo), asi panguva imwechete iyo inotaura inobata nemafungiro edu uye kwete nyika pachayo. Kana iri nyika pachayo, kutaura kwokuti “Mwari akanaka” hakurevi chinhu (kuzivikanwa kusina maturo, tautology).
Iyi ndiyo imwe nyaya yedambudziko rehukama pakati pezvinoreva nekudzidzisa. Kutora muenzaniso unoshandiswa nevazivi vekuongorora (ona semuenzaniso. Here), Chirevo: Nyeredzi yemambakwedza ndiyo nyeredzi yemadekwana. Izvi ndizvo zvave zvichionekwa kwenguva yakati senyeredzi mbiri dzakasiyana (imwe inoonekwa manheru uye imwe mangwanani), asi pakupedzisira takaona kuti inyeredzi imwe chete pachayo. Isu tave kubvunzwa: Chirevo ichi ichirevo chisina chinhu kana tsananguro (analytical theorem)? Iine zvemukati here kana kuti i tautology isina chinhu? Zviri pachena kuti mutsara wakadaro hautauri chinhu, sezvo chiri chiziviso pakati pechinhu nacho pachacho. Asi pfungwa yedu ndeyekuti pane zvitsva mumutsara uyu. Inotidzidzisa chimwe chinhu pamusoro pemafungiro edu pachedu. Nyeredzi mbiri dzataifunga kuti dzakasiyana inyeredzi imwe chete. Mutsara uyu unoshandura ruzivo rwedu rwepasirese, kunyangwe maererano nezvinangwa zvaro zvinoita sechinhu chisina chinhu.
Ziva kuti ndizvo zvazviri kune chero chitupa chekuzivikanwa cherudzi: a is b. Kufunga kuti chirevo ichi chakarurama, saka zvinoreva kuti: a is a, kureva tautology isina chinhu. Mhinduro yekuongorora kudambudziko rezvinoreva zvekuzivikanwa ndiko mutsauko pakati pezvinoreva nedzidziso. Vazivi vekuongorora (vanotevera Frege) vanoti maererano nekuzivikanwa kwakadaro kune zvinoreva asi kwete murayiridzo (kana ruvara). Rine chirevo chisiri chisina maturo kana chidiki kwatiri, asi kana ukatarisa zvarinongedzerwa kwazviri munyika, idivity identity claim.
Iye zvino tinogona kudzokera kuOthipron dambudziko. Maererano nedivi rokuti Mwari ndiye anotsanangura chakanaka nechakaipa, zvinogona kupokanwa kuti kutaura kwokuti akanaka kune zvakunoreva asi kwete dzidziso. Panyaya yekudzidzisa kwayo (ruvara) haina chinhu sezvo yakanaka netsanangudzo chaiyo yezvakanaka. Zvese zvaaizoita zvaizomusiya pasi petsanangudzo yezvakanaka, saka Amira akanaka haana chinhu chemukati (analytical).
Asi zvakandiomera kuti ndigamuchire kunyange mashoko manyoro aya. Murangariro wakapfava ndewokuti Mwari zvirokwazvo anofanira kuva akanaka, zvichireva kuti kutaura kwokuti akanaka hakusi rondedzero isina maturo asi kutaura. Dai zvisina kudaro, pangadai pasina chikonzero chekuita kunaka kwaMwari, uye pangadai pasina mibvunzo pamusoro pazvo kubva muzviito zvinoratidzika sehunzenza kwatiri (zvakadai sekusungwa kwaIsaka, kuparadzwa kweAmareki, uye like). Zvinofanira kunzwisiswa kuti kana izvo Mwari zvaanoda zvichitsanangurwa sezvakanaka saka hapana nzvimbo yekupokana kwetsika nezvazvo. Akaraira kutevera Isaka naizvozvo kusungwa kwaIsaka chinhu chakanaka. Kunzwa sokunge kuti pane kusawirirana pano pakati pemurairo woumwari netsika kunonongedzera pokutangira kwedu kuti Mwari akanaka. Sezvo kuvepo kwegakava retsika kunoratidza chinangwa chetsika (zvikasadaro pangadai pasina chekupokana nezvazvo) uye kuvepo kwekutsoropodza kwetsika kunoratidza chinangwa chechokwadi chetsika (zvikasadaro hapana nzvimbo yekutsoropodza maitiro asina kunaka uye maitiro).
Mhedziso ndeyokuti nyore kwechitendero intuition inotidzidzisa serumwe rutivi rweOthipron dambudziko kuti zvakanaka zvinotsanangurwa uye nechisimba zvinotsanangurwa kunyange naMwari. Kureva kuti Mwari vanoda zvinhu nekuti zvakanaka kwete neimwe nzira. Nenzira iyi chete inogona kukakavara kuti yakanaka, uye zvakare kutsoropodza (kana kutsvaga tsananguro) kune zviitiko zvekusazvibata. Asi sezvataona nzira iyi inomutsa dambudziko rakapesana, uye ini ndichaenderera mberi nekuzvigadzirisa.
Pakati pemitemo yefizikisi uye "mitemo" yepfungwa
Iyi nzira inomutsa kuoma kwezvidzidzo zvouMwari zvakapesana. Zvinobvira sei kuti Mwari, akasika zvinhu zvose uye zvinhu zvose zvakaitwa nesimba rake, achiri pasi pemitemo yokunze yaasina kudzika? Kuti tinzwisise izvi, tinofanira kudzokera kumusiyano wandakaita pano munguva yakapfuura pakati pemhando mbiri dzemitemo (ona semuenzaniso. 278) Mwari, chokwadi, haazi pasi pemitemo yefizikisi, nekuti ndiye akazvisika, uye muromo wairambidza muromo wakabvumira. Iyewo haasi pasi pemitemo yenyika hongu (kana chete nekuti haasi mugari wemo). Asi kune rumwe rutivi zviri pachena "pasi" kumitemo yepfungwa. Mitemo yepfungwa "inomanikidzwa" pana Mwari. Haakwanisi kugadzira gonyonhatu yakaurungana kana kutsauka kubva papfungwa, nekuda kwekuti hakuna chinhu chakadai seyegonyo denderedzwa uye hapana mhuka yakadaro inotsauka kubva pakufunga. Gonyo netsanangudzo haina denderedzwa. Izvi hazvikonzerwi nemutemo chero upi zvawo wakatemerwa pamatatu kunze kwekudikanwa, asi nemasikirwo awo chaiwo. Netsanangudzo yaro chaiyo segonyo rinotevera kuti harina kutenderera uye harigone kuve rakatenderera. Naizvozvo kusakwanisa kuumba gonyonhatu yakaurungana hakukonzerwi nechirango chekunze chakatemerwa Mwari, uye naizvozvo hachisiwo chidziviso pakugona kwaro kwese, kana kukanganisa mazviri.
Chisikwa chine masimba ese chinokwanisa kuita zvese zvinofungirwa kunyangwe mukufungidzira. Asi gonyo yakatenderera ipfungwa isina chinhu. Hakuna zvakadaro uye hazvifungidzike. Naizvozvo kusakwanisa kwaMwari kusika chinhu chakadaro hakusi kukanganisa mukugona kwake. Fungidzira mumwe munhu anokubvunza kana Mwari vachigona kugadzira denderedzwa retatu. Ndaiti atange anditsanangurira pfungwa iyi pamwe ndaizoipindura. Hongu haakwanisi kuitsanangura (ine makona akapinza here kana kuti kwete? Kuwanda kwemakona ayo ndeapi? Mapoinzi ose ari pairi ane chinhambwe chakaenzana kubva pachinhanho ichocho here?), Saka mubvunzo unozviratidza wega.
Sezvandakatsanangura ipapo, chiri pasi penyonganiso iyi ishoko rekuti “mutemo,” iro rinoshandiswa mumamiriro ezvinhu maviri aya neimwe nzira. Mitemo yefizikisi mitemo yakadzikwa naMwari muhunhu hwekusika. Uyu mutemo isarudzo yake yekugadzira humwe hunhu hwepasirese hwaakasika kubva kune akati wandei akasiyana. Aigonawo kugadzira mimwe mitemo yezvakasikwa. Mukusiyana, mitemo yepfungwa haisi mitemo nenzira imwechete. Kushandiswa kweshoko rekuti “mutemo” muchirevo chechinyorwa chinonzwisisika kunokweretwa. Ingori tsananguro yezvinhu kwete chimwe chinhu chekunze chinomanikidzwa pazviri. The triangle haina kutenderera kana nekuti mumwe munhu anoirambidza kana nekuti inorambidzwa. Nekuda kuva gonyonhatu harina kutenderera. Naizvozvo hazvina kunaka kutaura pano kuti Mwari akasarudza nzira imwe ine njere kubva mumaitiro akati wandei. Hapana imwe nzira ine musoro. Kubva zvino muchirevo chakafanana neicho chemitemo yepfungwa ndichashandisa izwi rekuti "mutemo" mumakotesheni.
Chimiro chemitemo yetsika
Mubvunzo unomuka zvino ndewemamiriro emitemo yehutsika: Mitemo iyi mupfungwa yemitemo yefizikiki, kana kuti "mitemo" mupfungwa ye "mitemo" yepfungwa? Avo vanotsigira rutivi rwekutanga rweOthipron dilemma vanotenda kuti mitemo yetsika yakafanana nemitemo yefizikisi, uye naizvozvo ndiMwari anogadza uye anotsanangura. Kune rumwe rutivi rwedambudziko, kune rumwe rutivi, rinotora kuti "mitemo" yehutsika yakafanana ne "mitemo" yepfungwa (iyi "mitemo" uye kwete mitemo), uye naizvozvo inomanikidzwa kuna Mwari. Angadai asina kugadzira gadziriro yakasiyana yemitemo yetsika. Semuenzaniso, haakwanisi kugadzira nyika umo humwe hutsika huchatonga (kuti kuponda kana kutambudza vanhu kuchava nezviito zvakanaka). Hunhu netsanangudzo inorambidza kuponda.
Anogona zvamazvirokwazvo kusika nyika umo vanhu vachafarikanya kutambudzwa (kwaizova kwakarurama here munyika yakadaro kuvadana kuti “kutambudzwa”?), Uye ipapo kungasava nechinetso chetsika mukuparira kutambura. Asi uko kunokonzera kutambura hakusi kunosuruvarisa. Kupenda vanhu chinhu chakaipa munyika ipi zvayo inogoneka. Inotaura nezvenyika yakasiyana chaizvo, i.e. nyika umo kutambura kusingakonzeri kusuruvara. Munhu anogonawo kufunga nezvenyika iyo kutsvinyirwa kwevanhu kunorondedzerwa seyakanaka, asi haisi nyika ine hunhu hwakasiyana asi inyika ine vanhu vasingaoni mitemo yetsika (uyezve Mwari akazvisika haana tsika. ) Iwe unogona kushandura chero paramende muchimiro chenyika uye kugadzira imwe nyika iyo ichave yakasiyana. Asi tichipihwa hunhu hwenyika iyoyo, mitemo yetsika inotorwa kubva mairi zvisina mubvunzo (inomanikidzwa patiri). Zvinoratidzika kwandiri kuti izvi ndizvo zvinotsigira chirevo chaRamchal chinozivikanwa, "Zvakanaka hunhu kuita zvakanaka." Mwari anofanira kuita zvakanaka. Haana imwe sarudzo (inomanikidzwa paari).
Izvi zvinoreva kuti chirevo chekuti "mhondi yakaipa" ndeyekuongorora, semutemo wekupokana. Kunyange ichi chiri chokwadi chetsika, haina kukakavara (asi inofanirwa). Naizvozvo hapana chinodzivisa kutaura kuti zvinomanikidzwa (kana kuti: "kumanikidzwa") pana Mwari, sezvakangoita pfungwa "kumanikidzirwa" paari. Izvi zvakasiyana nemitemo yezvakasikwa semuenzaniso. Tora semuenzaniso chirevo chemutemo wesimba rinokwevera zvinhu pasi: chero zvinhu zviviri zvine uremu zvinokwezva chimwe nechimwe nechisimba chinoenzanirana nechigadzirwa chehukuru uye zvakapesana nepakati pesikweya yedaro riri pakati pazvo. Ichi hachisi chirevo chekuongorora, uye chinogona kunge chiri chenhema. Panogona kunge kune nyika umo mutemo wegiravhiti waizova wakasiyana (semuenzaniso simba rinoenzana nechinhambwe chetatu). Mutemo wakadaro naizvozvo wakatsaurirwa kuna Mwari, uye chisarudzo chake bedzi ndicho chinotema zvauri.
Kuti inopindirana sei nekoramu yapfuura
Muchikamu chakapfuura ndakaita nharo kuti hapangave netsika dzakanaka pasina Mwari. Izvi hazvipokanise here zvandinotaura pano kuti tsika dzinomanikidzirwa pana Mwari uye pamberi pake, uye naizvozvo hazvisi chibereko chekuda kwake? Sezviri pachena pane kupesana kwepamberi pano. Iye zvino ndinonzwisisa kuti izvi zvichida izvo Jeremy Fogel, mutungamiri, aireva, uyo akasimudza dambudziko reOthipron muhurukuro yedu uye akandibvunza maonero angu pamusoro payo.
Muhurukuro pachayo ndakatsanangura muchidimbu kuti ndinosiyanisa pakati petsanangudzo yechakanaka nechakaipa nekuzvipira kwedu kwazviri. Tsanangudzo yezvakanaka nezvakaipa inomanikidzwa kuna Mwari uye haigone kuve neimwe nzira. Kunyange iye haagoni kuona kuti kuuraya kwakanaka, kana kuti kubatsira vamwe kwakaipa. Asi kuzvipira kuita zvakanaka nekunzvenga zvakaipa hakuna pasina Mwari. Mune mamwe mazwi, chirevo chetsika chekuti kuponda kunorambidzwa, zvichireva kuti pane chinosunga chechokwadi kune chetsika chekurambidza kuponda, haamanikidzirwe kuna Mwari. Kunobva pamurayiro wake uye kunoitwa naye.
Tichidzokera kupfungwa ye 'ethical facts', tinogona kuzvitaura seizvi: zvinogona kuvapo zvega, sekutaura kunoita David Enoki (kureva kuti haasi Mwari akazvisika), asi sezvandakamupikisa kunyangwe zviripo uye zvakaiswa mukati. imwe kona yenyika yemazano (iri), Haisati ichigona kusungirira pandiri (ndinofanira). Ini ndichataura kuti muchikamu chakapfuura ndakasiyanisa pakati pemubvunzo wekuti ndiani akasika chokwadi chetsika (mabatiro naEnoki) uye mubvunzo wekuti ndiani anovapa chokwadi (mandakabata). Zvandatsanangura pano ndezvekuti kunyangwe Mwari vasina kusika chokwadi chetsika (vanomanikidzwa paAri), murairo Wake chete unokwanisa kuvapa simba rinosunga.
Mumwe angabvunza zvino kuti chii chinosungira Mwari pachake mutsika? Kana iye akanaka saka iyewo anofanira kuzvipira kuhunhu (kune yake categorical order). Akasungwa nemurairo wake here? Izvi zvinoshamisa kwazvo, uye zvakare zvinopokana nezvandinotaura kubva pakoramu yapfuura kuti chinhu chekunze chinodiwa chinopa de Dicto kutendeseka kumutemo.
Ndinofunga kuti zvingava zvakanaka kutaura kuti Mwari haana kuzvipira kutsika, asi anozvisarudza. Haasarudzi kuti tsika chii (nokuti inhamba yakakwana uye yakaoma isiri mumaoko ake) asi anosarudza kufadza uye kurayira mufambiro wetsika kubva kuzvisikwa zvake. Izvi zvakafanana nekutaura kwangu muchikamu chekare chakanangana neAri Alon, kuti munhu anogona kuzvipa mutemo kana ane tsika kana kuti kwete, asi haakwanisi kugadza mitemo yehutsika ivo pachavo (tsanangura kuti chii chakanaka uye chakaipa). Kana zvakadaro, vose vari vaviri munhu naMwari vanosungwa nemitemo yetsika. Tsanangudzo yezvakanaka nezvakaipa inomanikidzwa pavari uye kwete kupihwa kwavari. Asi Mwari vanogona kuraira tsika nekudaro vopa tsananguro idzi simba rinosunga kwatiri, uye munhu haakwanise kuzviitawo.
Ini zvino ndichawedzera imwe tier kumufananidzo. Zvakaoma kutaura pamusoro pekufambira mberi kwechinguvana kwechokwadi chetsika (tsanangudzo dzechakanaka nechakaipa) kuna Mwari, sezvo akagara aripo. Pamberi pake pakanga pasina nekuti hapana nguva pamberi pake. Hakuchina uye hakugoni kuva nenyika, kunyange yekufungidzira, umo Mwari asipo. Asi nedzidziso panogona kunge paine nyika iyo Mwari asingaraire kuve nehunhu (kunze kwekunge isu tichifungidzira kuti kunaka kwake kunomumanikidza kuita zvakanaka uye kuda kubatsirwa). Ona kuti zvino tadzidza kuti tsika dzinotangira murayiro waMwari, asi kwete Mwari. Zviri pamusoro penguva pfupi mberi. Asi pamwero wakafanana kunewo kufambira mberi kwakakura.
Chokwadi chetsika hachitsamiri pamurayiro waMwari, uyewo harisi basa raMwari. Asi hakusati kuchine revo kukutaura kwokuti tsika dziriko kunyange pasina Mwari. Tichifunga kuti Mwari ndiye ane kuvapo kwakakosha (uye pano ndiri kutaura pamusoro paMwari wechitendero, uye kwete "akaonda" kubva pachikamu chakapfuura), saka hazvibviri kutaura nezvechokwadi umo mune humwe huripo. haapo. Naizvozvo kunyangwe kana hunhu (kana hutsika chokwadi) huripo pasina murairo hazvinganzi huriko pasina Mwari. Kunyange zvazvo zvose zviri zviviri zviri zviviri zvakafanana, chokwadi chetsika hachisati chave chichitsamira pana Mwari.
Asi zvino tinogona kusvika patsanangudzo yakati siyanei zvishoma: chokwadi chetsika ipfupa raMwari pachake (zvinoreva "chimiro chakanaka chekuita zvakanaka" sezvazviri), zviripo sezvaari, uye sezvaari chaizvo uye. nguva dzose dzinofanira uye dziripo nguva dzose. Uye zvakadaro kuvimbika kwavo hakusi kwechigarire kana kudikanwa. Havana simba rinosunga pasina kurairwa kuita kudaro.
Pakati pekushumira Mwari naAsheri hakuna kushanda
Mukuvhurwa kwekoramu ndakasimbirira kuti pfungwa yaMwari inokurukurwa mukoramu iyi haisi Mwari "akaonda" kubva pachikamu chakapfuura (Mwari anodiwa kuti ape chokwadi kumitemo yetsika uye chokwadi chetsika). Iwe unozoona izvi paunoongorora zvakare mazano akasiyana-siyana auya pano maererano nenyaya yekuti pane chikonzero chinogara chiripo, uye nezve chokwadi chekuti chokwadi chetsika chikamu chemasimba ayo uye kuti ndezvemuzvarirwo kuita zvakanaka. nezvimwe. Izvi zvese zvekuwedzera izvo "zvinoita" zvishoma "mafuta" iyo "yakaonda" uye minimalist chinhu chandakatarisana nacho mukoramu yapfuura.
Izvi zvinodaro nekuti nhaurirano iri muchikamu chazvino inoitika zvachose munharaunda yezvidzidzo zvebhaibheri, uye kwete chete iyo meta-ethical. Muchokwadi, iyo Othipron dilemma pachayo ndeyenzvimbo yebhaibheri. Pasina dzidziso yebhaibheri ingadai isina kuva dambudziko kutaura kuti Mwari anotsanangura mitemo yetsika (nekuti pakanga pasina chikonzero chekufungidzira kuti kutaura kwokuti akanaka igakava pamusoro pake uye kwete tsanangudzo), ipapo dambudziko ringadai risina yakagadzirwa. Pamusoro pezvo, mukuverenga kwehuzivi zvakare pakanga pasina kupokana kumashoko angu muchikamu chakapfuura. Kana Mwari achitsanangura chakanaka nechakaipa (iyo yetsika chokwadi) zvino inoenderana zvakakwana nezvandakapokana muchikamu chakapfuura, uye pakanga pasina chikonzero chekoramu iyi yese. Chinangwa changu pano chaive chekuyananisa chirevo changu chetsika kubva pachikamu chakapfuura naMwari wendege yezvidzidzo zvebhaibheri (muJudha-muKristu) ane fungidziro yekuti akanaka. Iyi inhaurirano yedzidziso yebhaibheri yakajeka (uye kwete meta-ethical).
Dambudziko reOthipron maererano netsika dzechitendero
Kakawanda munguva yakapfuura ndakaratidza musiyano pakati petsika dzechitendero uye tsika (ona semuenzaniso chikamu 15, Kutanga kwebhuku rangu Anofamba pakati pekumira Uye zvakawanda). Mhinduro yandinopa kune kupokana pakati pe halakhah nehunhu huri muchokwadi chekuti aya maviri akazvimirira maitiro masisitimu. Act X inogona halakhically kuzvipira (nokuti inokurudzira kukosha kwechitendero A), asi panguva imwechete inorambidzwa mutsika (nokuti inogumbura kukosha kwetsika B). Hunhu hwechitendero hunzenza, uye dzimwe nguva vanogona kumira mukupesana nehunhu uye dzimwe nguva mukupokana (apo kupokana kunomuka mune mamwe mamiriro chete). Kupokana kwangu ndekwekuti hapana chipingamupinyi mukupokana kwakadaro, uye kutaura zvazviri zvakanyanya kutaura kuti izvi hazvisi kupokana (hapana kuomerwa padanho redzidziso mumamiriro ezvinhu akadaro), asi kupokana (zvakaoma kusarudza kuti chii ita padanho rinoshanda).
Zvichitevera izvi, Tirgitz akabvunza mubvunzo unotevera (bTalkback Kuchikamu chakapfuura):
Izvi zvinoreva kuti muchikamu chinotevera iwe uchabatawo neiyo otter maererano netsika dzechitendero uye humwe hunhu, izvo mumaonero ako zvinokosheswa kuburikidza nazvo izvo Gd anozvibvumira kubvisa chero chisungo chetsika. Uye izvi zvinoreva kuti kunyangwe Mwari haana kuzvigadza nemadiro.
Ndichatsanangura mubvunzo wake. Mukuwirirana nomutoo wangu, Mwari anotirayira kuva nemipimo inorwisana netsika kuti tisimudzire mipimo yorudzidziso. Kana zvakadaro, Tirgitz anopikisa, zvinoita sekunge tsika dzechitendero dzinomanikidzwawo paari uye hazvisi mhedzisiro yekuda kwake kwechipo (mutemo wake wekutonga). Dai mirairo yanga isiri “halakhic chokwadi” yaisirwa pana Mwari asi yakasikwa nemutemo Wake, saka angadai akaigadza zvakasiyana. Mumamiriro ezvinhu akadaro ndingatarisira kuti kana achida (uye akagara nhaka) kuita zvakanaka aisazodzika mitemo inopikisana nehunhu. Kuvapo kwemakakatanwa kunoratidza kuti mitemo yeHalakhah (kana tsika dzechitendero, dzinosimudzirwa nemirairo yeHalakhah) inomanikidzwawo kuna Mwari, uye saka anobatwa (kana kutidheerera) kunze kwekukodzera kune izvi.
Uyu mubvunzo mukuru, uye ndinofunga ari pachokwadi. Sezvo paine chokwadi chetsika kune zvakare halakhic chokwadi. Izvi neizvi hazvitsamire pana Mwari uye zvinomanikidzwa paAri. Pakutanga kwebhuku rechitatu mutrilogy ndakanga ndava kuda kuenzanisa mufananidzo weKantian wehunhu hwekuzvibata sekukudza kurongeka kwechikamu nemufananidzo we halakhic wandinopa wekuita mitzvah sekukudza kuzvipira kumurairo. Pano tinoona kuti kuenzanisa uku kunoenderera mberi.
Izvi zvinondiunza kune mumwe mubvunzo naTirgitz, wakabvunzwa mazuva mashoma apfuura (ona kutenderera nhaurirano mushinda. Here) Mumamiriro ezvinhu ehutsika zvakajairika kufunga kuti mumamiriro ezvinhu emakakatanwa pakati pezvinokosha, saka kunyange dai ndaive nechikonzero chekuita X uye kuenda pamusoro peY, pachine dambudziko randakapfuura Y. Ndinofanira kunzwa kusuruvara kana kusuruvara kurwadzisa munhu kana kuita unzenza, kunyange dai ndaifanira kuita izvi. Tirgitz akabvunza kana kusuwa kwakadaro kuchifanirwawo kuoneka mune halakhic mamiriro (Q.)kutaura: "Kusuwa imi neshungu kwandiri"). Ndiko kuti, ndozvidemba here kuti nokuti ndakaita mitzvah handina kuzunungusa lulav (kana kuti nokuti ndakanga ndichirwara handina kutsanya paYom Kippur), sezvandinodemba kuti nokuti ndakaenda kuhondo ndaifanira kuuraya. vanhu (uye dzimwe nguva vanhuwo zvavo). Muchidimbu, mubvunzo wake ndewekuti pane musiyano pakati pe halakhah uye tsika munyaya iyi.
Ndakamupindura ipapo kuti ndinofunga kuti pane musiyano pakati pemamiriro ezvinhu: mumamiriro ezvinhu ehutsika kunyange kana humwe hutsika hukarambwa pamberi pehumwe hunokosha, ndinofanira kuramba ndichinzwa kusuruvara kana kusagadzikana nekuda kwekudarika kukosha kwakarambwa (Ndinokuvadza munhu) . Nekune rimwe divi, mu halakhah kana pasina chisungo uye ndakaita zvakafanira pandiri hapana chikonzero chekudemba zvandisina kuzadzisa. Zvinotenderwa zvakakwana uye hapana anokuvadzwa.
Asi mutsauko uyu unotora kuti mu halakhah mune murairo chete uye kana pasina murairo hapana chakaitika. Asi muchiedza chemufananidzo unobuda pano zvinoita sekunge ndinofanira kudzoka kwandiri kubva mumutsauko uyu. Kana isu tichifunga kuti murairo we halakhic wakauya kuzosimudzira tsika dzechitendero, saka kunyangwe ndikatyora halakhah nenzira kwayo (nekuda kweimwe halakhah yairamba), zvakadaro chimwe chinhu munyika yemweya chakakuvadzwa nazvo (ndakaita zvinopesana neicho halakhic uye zvakaunza kukuvara kwemweya). Zvinoita sekuti mufananidzo wandaratidza pano unoratidza kuti hapana mutsauko pakati pe halakhah nehunhu panyaya iyi.
Kunyangwe pane kumwe kufunga kunogona kupokana kuti muchirevo kana ndakaita chimwe chinhu chakabvumidzwa ipapo kukanganisa kwemweya kwakadziviswawo (ona Zvinyorwa Pamusoro pecitric acid paPaseka, kwandakaunza zvinyorwa zvinonyora kudaro). Zvinogona kunzi Mwari anoita chishamiso uye anodzivirira kukanganisa kuitira kuti parege kuva nechakaipa nemunhu akarurama seni akatendeka kumutemo. Izvi hazvo hazviitike pahunhu. Ikoko kunyange dai ndaifanira kukanganisa tsika, kukuvara hakudzivisiki. Musiyano unobva pachokwadi chekuti mumamiriro ehunhu aya ichokwadi chenyama uye mune halakhic mamiriro aya ichokwadi chemweya. Mwari haashandure physics nekuti haapindire mukufambiswa kwenyika inobatika, asi anoshandura ma facts emweya (nekuti munyika yemweya anopindira. Imomo haiite mechanically conduct). Zvakakosha kuziva kuti kunyange sezvatakaona chokwadi chetsika hachisi chokwadi chemuviri, zvinoenderana nezviri mumuviri (kukuvadzwa kana kutambura kumunhu semuenzaniso). Semuyenzaniso, kana ndakabira munhu mari kuchengetedza hupenyu, zvino kunyangwe zvichitenderwa uye pamwe kunyange mitzvah, kukuvadzwa kwembavha kwakaitika uye hapana chikonzero chekuzvidemba (pano hazvizoitike chishamiso chekuti Mwari achadzosera mari kwaari).
Zvazvinoreva zvichave zvemakesi sezvandakatsanangura muchikamu chakapfuura, apo iyo categorical order inondiudza kuti handifanire kuita X kunyangwe isina mhedzisiro. Mumamiriro ezvinhu akadaro zvinoratidzika kuti kana chinhu chikarambwa kune imwe kukosha hapana chekuzvidemba. Izvi zvakafanana nemamiriro ezvinhu muharakhic sphere. Semuenzaniso, ngatiti ndinokwidza chiuru chemutero weNIS kuchengetedza hupenyu hwemunhu. Muchiitiko chakadaro handina chekuzvidemba pamusoro pekunzvenga mutero sezvo isina mhedzisiro yakaipa (ndakatsanangura izvi muchikamu chakapfuura). Kupfuura dambudziko remhedzisiro iyo isipo, chiri pano kungodarika kweiyo categorical kurongeka, asi izvi zvechokwadi zvakaruramiswa mumamiriro ezvinhu aya. Muchokwadi, zvakanyatsojeka kutaura kuti ini handina kutyora iyo categorical kurongeka zvachose mumamiriro ezvinhu akadaro. General mutemo unoti munhu wese anofanirwa kunzvenga mutero kuitira kuchengetedza hupenyu.
 Muchikamu chakapfuura ndakatsanangura kuti sei mutemo wekupokana sechirevo chine musoro-yekuongorora usingadi kururamiswa. Iyi ipfungwa imwechete kubva pakona yakati siyanei.
 Funga nezvomubvunzo wokuti Mwari anogona here kugadzira rusvingo rusingachinji mabara ose uyewo bara rinopinda mumadziro ose. Mhinduro yeiyi yakaipa hongu, nekuti kana bhora raakasika rakapinda mumadziro ese saka hapana rusvingo rusingamiri pairi, uye saka hapana rusvingo runopesana nemabhora ese, uye zvinopesana. Kusakwanisa kwaMwari kusika zvinhu zviviri zvakadaro panguva imwe chete hakukanganisi mano ake. Zviri nyore padanho rinonzwisisika hapana chokwadi chakadaro. Maona Here Zvinorehwa nemubvunzo wedombo uyo Mwari havagone kusimudza, uyeHere Pamubvunzo wehuipi hwepanyama (onawo bhuku rechipiri mutrilogy yangu muchitsauko chegumi).
 Mhedziso ndeyokuti kunaka kwake (kuridza muridzo) kwakasiyana nekwedu. Haana mitemo inosunga yaanoteerera, asi ndiye anoisimbisa. Munhu wacho anosungirwa nehurongwa hwechikwata hunopiwa kwaari, uye naizvozvo chisarudzo chinofanira kuitwa kuti chiite maererano nazvo. Mwari, kune rumwe rutivi, haana kuzvipira, asi anosarudza kuipa. Ramchal achati hunhu hwake kuita zvakanaka.
 Pakutanga kwekoromo 278 Ndakurukura pfungwa yenehma dhakisufa, uye zvinoratidzika kwandiri kuti nhaurirano iripo inopindurawo mubvunzo uyu.
 Ona zvinyorwa pamusoro pekurongeka kwechikamu mu halakhah, izvo zvinoratidza kuenderera kwekuenzanisa pakati peharakhah nehunhu, asi panguva ino zvine chekuita nezvirimo kwete chimiro chine musoro. Ikoko ndinopokana kuti iyo categorical order ine halakhic chimiro.
 Ini ndichaunza pano pfungwa yekutanga iyo ichiri kuda incandescence. Ndinofunga kuti pane musiyano shure kwezvose. Muchirevo chetsika pane kuzvipira kune tsika dzakanaka, asi mu halakhah mune zvese kuzvipira kune tsika dzechitendero uye chisungo chekuteerera kurongeka kuburikidza nekuva kurongeka kwehumwari (zvisinei nekuti inokurudzirawo tsika dzechitendero. ) Mafungiro apa ndeekuti muhunhu hamuna murairo waMwari asi kuda kwaMwari chete kuti tiite nenzira iyi. Kurongeka kwechikamu hachina chimiro che mitzvah mukati meiyo halakhah (kunyangwe ini ndichiti ine halakhic chinzvimbo. Ona zvinyorwa zvangu Here).
Uye zvinotevera kuti kana ndikasatsanya paYom Kippur nekuti ndiri kurwara, chiyero chemurairo hachipo, sezvo murairo mumamiriro ezvinhu akadaro ndewekudya uye kwete kutsanya. Saka kubva pakudya uku hapana chakaipa chakaitika uye hapana chekuzvidemba. Kune rumwe rutivi, mumamiriro ezvinhu ehutsika, kunyange kana humwe hunokosha hukarambwa zvakakodzera, musengwa wetsika wokuchengeta unoramba wakafanana (kunze kwekuti haugoni kuteererwa. Kutaura zvazviri, ndinopokana kuti mukukakavadzana kwetsika nguva dzose 'kunorambwa. ' uye kwete 'kubvumidzwa'). Asi mu halakhah panewo chiyero chinokonzeresa (kururamisa kwakagadzirwa kubva kumitzvah uye kuparadzika kubva mukukanganisa), uye maererano neizvi panoratidzika kunge kune kufanana kune zvatakaona mumamiriro ehunhu. Izvo zvine chekuita nemusiyano pakati pekuvapo kwe de dicto uye kuvapo kwe de re, zvichingodaro.
 Ona chinyorwa pa bZvinyorwa PaKurangwa kweHalacha muChitsauko D, kwandakabuda ndichipesana nemakanika nzira mukurangwa kwedenga.
Pindura chikumbiro che "Ndiani akasika Musiki".
80 Pfungwa pa“Kutarisa PaDambudziko reOthipron Muchiedza cheGakava (Koramu 457)”
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na04:XNUMX
Mumwe nyamukuta anodemba kuti akadziviswa kutsanya paYom Kippur. Panyaya yezvakakosha yakavharwa zvachose - inoregererwa. Ukuwo, murairo wekutarisa mweya nemweya unopfuura zvakanyanya. Asi ane urombo, kunyange achinyatsoziva kuti murairo wake panguva ino ndewekudya, nokuti haana kutsanya. Haana zuva rekutsanya, rekucheneswa uye rekuregererwa. Iwe uchadzinga manzwiro aya seAfra Daraa, uye uchirasa nechikonzero che 'psychology' - nharo dzausingafungidzire? Kana kuti pane chimwe chinhu here pano icho nenzira yakati chakafanana nenhamo yokupotsa tsika?
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na01:XNUMX
Ndinonzwisisa zvizere kusuwa uku, uye ndinofungawo kuti zvechokwadi kune nzvimbo. Zvandakurukura mubvunzo wekuti pane kufarira / chisungo (kwete halakhic) chekudemba. Muchidimbu, ndiri kutarisana nenormative pane danho repfungwa. Kana vanhu vakarasikirwa nemutambo wenhabvu vane hurombo, saka haungave mufundisi semuchengeti wemba yevaeni?!
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na18:XNUMX
Handina kubvunza kana iwe uchinzwisisa kusuruvara, kunze kwekuti iwe uchiona mairi kukosha kuri pedyo kana kufanana nekurasikirwa kwehutsika. Kwete kupotsa kupotsa mutambo wenhabvu.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na49:XNUMX
Kwete kusvika pamwero wakafanana, kana zvachose. Zvinoenderana nezvandakanyora mukoramu, tichifunga kuti Mwari anodzivirira kukuvadzwa kwemweya kana mumwe munhu akaita zviri pamutemo, hapana chakaitika. Uye kana akademba kurasikirwa kwake (kurasikirwa neruzivo) - iyi ichokwadi kodzero yake asi hazvina hazvo kukosha. Zvichida inoratidza rudzi rweYarosh sezvo kusuwa kunoratidza kuti zvinhu zvakakosha kwaari. Asi kusuruvara kwetsika chimwe chinhu chinopfuura kutaura kuti ukoshi hunokosha kwaari. Nyaya yekuti pane chanetsa chakaitika pano, kunze kwekuti handina mhosva. Muchirevo che halakhic hapana chinonetsa chakaitika. Kazhinji wakarasikirwa neruzivo.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na13:XNUMX
Ndinofunga kuti hapana humbowo hunobva muidi rokuti kune mibvunzo yetsika pamusoro paMwari yokuti tsika dzinomanikidzirwa paari.
Iyi mibvunzo inongofungidzira kuti Mwari akasarudza murairo wetsika semusimboti wepamusoro, uye saka bvunza kuti angazvipikisa sei.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na18:XNUMX
Sharpener - mubvunzo uri kujekesa uye kwete kupokana. Ndiko, zviri pachena kwaari kuti pane kururamiswa kwetsika kweizvi, sezvo achifunga kuti tsika ndiyo nheyo yepamusoro iyo dumbu rakasarudzwa.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na03:XNUMX
Handina kumbofunga kuti abonderana. Kunze kwezvo, kana akanaka, saka kukurudzira hakuna kukosha. Asi ndinofunga kuti uri kurasikirwa nemutinhimira wemibvunzo iyi: unoiratidza semibvunzo ine musoro (pamusoro pekubatana kwayo), asi mibvunzo iyi ine hunhu. Zvinoita sekunge Abrahama akaraira kuteerera mwanakomana wake aizongoshamisika chete nezve kuenderana kwa Mwari uyo akavimbisa kuti Isaka aizomudana mbeu, uye oshaya hanya nemubvunzo wekuti Mwari vangaraira chinhu chakadaro sei. Kwauri iyi miviri mibvunzo yakafanana ine musoro. Handizvo zvinorehwa nanyanduri.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na35:XNUMX
Kana uri mubvunzo waTirgitz - uyu mubvunzo wakanaka chaizvo, nekuti manzwiro ekuti Halacha yakasiyana nemabasa ehunhu (sezvinoita Maimonides inokamura pakati pemirairo yepfungwa neyekunzwa, nezvimwewo). Imwe nzira yekutsanangura izvi ndeyokuti Mwari ari pasi peseti yezvemweya yatisina kuwana - uyezve mubvunzo unozobvunzwawo - kana Gd ari pasi pemitemo yakamisikidzwa yakadaro, zvinova pachena kuti iyi mitemo. ndiye munhu akakwirira, rudzi rweSpinoza Mwari Kwete pachake uye asina hanya, asi mune "zvakasikwa" zvisiri zvenyama. Zvinoratidzika kwandiri kuti mubvunzo wekuzviisa pasi kwaMwari kune mitemo hauna simba zvikuru kune zvisipo munyaya yemitemo ine musoro, sezvawakatsanangura (kuti haisi "mitemo"), uye yakasimba zvishoma munyaya yemitemo yetsika. , nokuti makakakavadzana - zvishoma zvishoma asi kutaura kwandinogona kugamuchira - kuti zvakakosha nenzira imwe chete. Asi kana zvasvika kune mitemo ye halakhic zvishoma zvakaoma kugamuchira, mumaonero angu. Nokuti kudikanwa kwavo kunosanganisira kusika nyika pazvinenge zvakakodzera, zvinoratidzika, uye pamusoro payo zvinoratidzika zvisingakoshi (nharo ndeyokuti ivo vanodiwa pamwero wepamusoro-soro, asi zvakadaro hazvibviri kuvanzwisisa - iyo inokurumidza kukurumidza; kunze kwekunge nyika yakasikwa pamwechete nemirairo iyi Kunetsa kudzvanyirira). Izvi ndezvechokwadiwo nezvemitemo yetsika ("" Chikonzero marwadzo akaipa "ndiye chirevo chinongoenderana nenyika iyo kune marwadzo - uye mubvunzo mukuru ndewokuti nei Mwari akasika marwadzo munyika uye kwete chikonzero nei akazvitaura. haifanirwe kukonzera marwadzo), asi neimwe nzira zvinoita sekunge yakasimba munyika yandakaenda uko mitemo inoita seinopokana. Chero zvazvingava, rinoisa Mwari munyika yakamutangira uye yaasina simba pairi. Nenzira, pane imwe dzidziso inogona kutarisana nemubvunzo uyu, wandisingazivi zvandinofunga nezvazvo - kutaura kuti Mwari aigona kusarudza nyika iyo mitemo yetsika chete yakakosha sebasa revanhu, uye aigona kusarudza. nyika iyo iyo mitemo pachayo inorambwa ichipesana nedzimwe tsika.Yayo inogona kuva chero chinhu uye inozviisa pasi pechisarudzo chake. Uye akasarudza chisarudzo chechipiri nemhaka yokuti pasina mugariro wakadaro, taisazotongotarira paiyi mitemo, yakanga iri pachena (sokunyora kunoita Maimonides pamusoro pomuti wezivo uye doc). Maererano nemukana uyu - kuvapo kwenyika yehalakhic inopesana nemitemo yehutsika dzimwe nguva inoruramiswa kune chimwe chikonzero chekunze, chisingadikanwi, uye haidi nyika yose yemitemo iyo Mwari ari pasi payo. Nekune rimwe divi, sezvataurwa, sarudzo chaiyo yekugadzira nyika yakadai inogona kuratidzika seine chokwadi.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na07:XNUMX
Handina kunzwisisa zvairehwa. Ini ndinongotaura pamapoinzi maviri mukutaura kwako (izvo ndinovimba ndakanzwisisa):
1. Mitemo haishande. Tsanangudzo yechakanaka nechakaipa haisati iripo asi pamwe ichokwadi. Naizvozvo hapana chekutaura pamusoro pemubvunzo wekuti ivo vakakwirira kuna Mwari here kana kuti kwete.
2. Mitemo yetsika zvakare mitemo munyika yedu chete. Dai imwe nyika yakasikwa iyo yakanga yakasiyana zvachose nezvisikwa zvakavakwa zvakasiyana zvachose (vakanga vasina kusuwa uye kutambura), saka mimwe mitemo ingadai yakashandiswa kwairi. Asi kana yaive mitemo yetsika saka iyi yaive mashandisirwo emitemo yedu yetsika kumamiriro iwayo. Izvi ndizvo chaizvo zvawakatsanangura nezve halakhah, saka zvinoita kunge pasina musiyano.
Vanakomana vake Izhaki Koren
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 na32:XNUMX
“Chese chitupa chekuzivikanwa cherudzi: a is b. Kufunga kuti chirevo ichi chakarurama, saka zvinoreva kuti: a is a, zvinoreva tautology isina chinhu. ” - Ndine nguva yakaoma kuwana dambudziko pano. Tichifunga kuti chirevo ichi chakarurama, zvine musoro zvakaenzana nekutaura A = A, asiwo kutora 1 + 1 = 2 uye kune chero chimwe chikonzero chakarurama. Kana chirevo chemutsara chiri ruzivo rwaunowedzera, saka hapana mutsara une "zvinoreva kufungidzira kuti ichokwadi." Kana isu tichifungidzira / tichiziva kuti ichokwadi, saka kutaura zvakare kuti ichokwadi hakuwedzeri ruzivo kwatiri, uye saka kwete kukosha.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 na44:XNUMX
Uye nemamwe mazwi: ane zvaanoreva uye kwete kudzidzisa.
Tsika dzababa vako
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/23 na10:XNUMX
Chinetso chakanaka cheUthron ndechezvidhori, izvo zvisinganyatso kujeka kuti zvinozivikanwa sei netsika. Asi, maererano nengano dzengano zviri pachena kuti dzakazara negodo nesimba.
Mukupesana, Mwari waIsraeri ndiye manyuko ezvokwadi uye manyuko ezvakanaka. Haasi 'kuzviisa pasi' petsika nechokwadi. Ndiye chokwadi nehunhu mukuchena kwavo kwakakwana. Isu sevasiki kuti ruzivo rwedu kadikidiki. Tinoziva zvishomanana nepfungwa dzedu, pfungwa dzedu uye kudzidza kwedu, asi chatinoziva kadikidiki kubva pamufananidzo wakakwana, uyo chete Musiki wenyika anoziva mukuzara kwayo uye iye oga anoziva chinangwa chayo.
Zvinetso zvedu zvetsika pamusoro penzira dzoMusiki zvakafanana nezvinetso zvomwana asinganzwisisi chikonzero nei baba vake vachirova ruoko rwake apo akangoedza kunamira sando mumudziyo wemagetsi, uye haanzwisisi kuti nei baba vake vakaiswa mumaoko avo. twunhu twuutsinye twehurungudo chena twakavhomora mapanga nekubvarura nyama yemukomana uyu.
Kana vari vabereki vevanhu, tatova neropafadzo yokunzwisisa kuti kurohwa kweruoko kunouya kuzoponesa mwana kuti asabatwa nemagetsi, uye ‘vanovhomora mapanga vakapfeka nguo chena’ vanoita oparesheni inoponesa upenyu pamwana. Kunyanya sezvakaitwa neMusiki wenyika, uyo akatora vanhu mazana emakore ekutsvakurudza kuti anzwisise zvishoma nezveudzame hwazvo - kuti tinobvumirwa kupa 'mbiri' kuMusiki wedu, kuti kutambura uye kurwadzisa kwaanoita. anotiunzira zvakatinakirawo, kutigadzirira mukoridho.'Lounge', uye tizive nemoyo yedu kuti kana baba vachirwadzisa mwanakomana wavo 'Elkich anotambudza iwe'
Makadi, Othipron Nefshatim Halevi
'Tsika dzababa vako' uye 'dzidziso dzaamai vako' - kugamuchira joko kana kunzwisisa uye kuzivikanwa?
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/02 na05:XNUMX
Kana Musiki aine chiziviso chakakwana pakati pekuda kwake nechakanaka chinangwa, munhu anogona kuva nemusiyano pakati pepfungwa yake yezvakanaka nezvakanaka nemirayiridzo yaanogamuchira kubva kuMusiki wake. Uye gaka iri harisi chete 'rinogoneka' asi rinodikanwa, asi rinoderedzwa chero bedzi munhu akadzika uye anonzwisisa zvakanyanya kuda kwaKono.
Pamberi pazvo, munhu angagutsikana nokugamuchira joko muchokwadi chokuti Musiki wenyika ari kutonga kunyange kana munhu asinganzwisisi, asi izvozvo hazvina kukwana. Nokuti munhu wacho haafaniri kungova 'muranda' akavimbika kuna Kono, asiwo 'mudzidzi' anoziva kududzira kuda kwaKono kunyange mumamiriro ezvinhu aasina kugamuchira mirayiridzo yakajeka.
Kune 'muranda' zvakakwana kurayira 'ita saizvozvo' kana kuti 'ita saizvozvo'. Haazotori nhanho asina kugamuchira murayiridzo wakajeka, asi kuti ave 'mudzidzi' anoziva nzira yekutungamirira kuda kwarabhi wake kunyange kana zvakakodzera 'kunzwisisa chimwe chinhu kubva pane chimwe chinhu', panofanira kuva nekunzwisisa kwe revo yezvinhu, yaanogona kushandisa nayo nheyo.
Kuti izvi zviitike, Torah yakanyorwa yakapihwa iyo yakanyorwa kubva kumusoro neshoko rekuti 'yakanyorwa pamahwendefa', asi inofanirawo kuva 'Oral Torah' inotsvaka kunzwisisa zvinorehwa nemitemo yeTorah, uye kubva pakunzwisisa zvakadzama Mitemo yeTorah - munhu anogona kutora mweya wezvinhu.
Kuburikidza neTorah yemuromo inojekesa mutemo werusununguko - munhu ari kuzvisunungura kubva mu 'dambudziko re' Yifron ', sezvo kuda kweMusiki kwakatanga se'kugamuchira joko rekunze' - kunowedzera uye kuwedzera 'Torah Delia' ne. izvo anonzwisisa uye anozivisa.
Nemwoyo wose, Enoki Hanaki Feinschmeker-Felti
C. Bader B. 06 - 03/2022/03 na12:XNUMX
“Asi kana chivi [munhu ari mumuti wokuziva] achirangwa nokubvisirwa kuwanwa kwoungwaru kumwe cheteko… uye nokudaro zvichinzi ‘uye imi makaita saMwari muchiziva zvakanaka nezvakaipa’ uye musingatauri ‘vanoziva nhema nechokwadi’ kana kuti 'vanowana nhema nechokwadi'.
Uye muzvinhu zvakakosha hapana chakanaka nechakaipa zvachose asi nhema nechokwadi ”(Mon., Chikamu I, P.B.)
Zvichida Maimonides pano ari kutaurawo nezve chokwadi chetsika uye anobvisa dambudziko reEitipron?
C. Bader B. 06 - 03/2022/10 na30:XNUMX
Ona chikamu 177 apo ndakatsanangura kuti uku kuremekedzwa uye kwete hunhu.
C. Bader B. 06 - 03/2022/12 na59:XNUMX
Ndinoonga nokuda kwenongedzero, ndakarava, ndingave ndisina kunzwisisa, asi handina kuona chinetso namashoko aMaimonides.
Zvinoratidzika kwandiri kuti mutongo unofanirwa kukamurwa kuita maviri:
"Uye iwe wakanga wakaita saMwari anoziva zvakanaka nezvakaipa" - izvi ndezvekuziva kwakagadzirwa mauri kune vanozivikanwa, vakanaka uye vanonyadzisa, zvakanaka kana kuipa. Saka zvino hunhu hunoratidzikawo kwauri hwakanaka nehwakaipa.
“Uye [ndima yacho] haina kureva nhema nechokwadi kana kuti vaya vanowana nhema nechokwadi, uye muzvinhu zvakakodzera hamuna chakanaka nechakaipa zvachose kunze kwenhema nechokwadi” - pano Maimonides anoreva tsika. Kureva kuti, mupfungwa iyi wabva kuna Mwari uye wakarasa simba renjere rawaimbova naro rekuona hunhu muchikamu chechokwadi-chamwari chiri chokwadi nenhema.
Inofanira kuverengwa somubvunzo nemhinduro - uye nei ndima yacho isina kuti “nhema nechokwadi”? Pindura - nekuti wakarasa. Asi iwe uchaziva kuti zvamazvirokwazvo, kuna Mwari, zvinhu zvinodikanwa (hunhu) hazvina kunaka uye zvakaipa asi nhema uye chokwadi. Uye pano dambudziko reEitipron rakanyanyisa.
C. Bader B. 06 - 03/2022/13 na52:XNUMX
Handichayeuki mashoko acho chaiwo, asi ndakaona kuti aingova ane ruremekedzo kwete tsika. Chero zvazvingava, kunyange kana iwe wakarurama kuti pane chimwe chirevo muMaimonides chisingadzivisi dambudziko reEitipron. Zvikurusa ungagona kutaura kuti Maimonides akanga ane chimiro chake amene pachinetso chacho.
Tsika-tsitsi kana tsika-kudzivisa?
MuSD ACH Tov muAdash XNUMX
Misiyano haisi pakati pe'chinamato' ne'tsika' asi pakati pe'tsika yetsitsi' ne'tsika yekudzivisa'. Detersh, kune rumwe rutivi, ane hunhu hwekudzivisa kuunza pamutadzi kutsiva kweutsinye kunozotora kubva kumutadzi weramangwana 'o ameni' yese yekudzokororwa kwemhosva.
Pano tinoda 'kurongeka kwoumwari' kunozopa muyero wakakodzera unozounza kuenzana pakati pekudikanwa kwekudzivisa kwakakosha uye chishuwo cheumwari chekunzwira tsitsi uye kubvumidza kururamiswa.
Nokudaro, somuenzaniso, kudzivisa kunoda kubvisa pamudzi vanhu vakatanga pfungwa yoruvengo nouipi - Amareki nevanhu veKenani - uye kune rumwe rutivi tsitsi dzinoda kuvadana kutanga kurugare uye kuvabvumira kutiza no'kuchinja nzira' nekugamuchira zvakakosha zvekutenda uye tsika.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/01 na49:XNUMX
Yakasimudzwa marble round triangle. Icho chinhu chinochengetedza zvese zvimiro zvegonyo uye zvakare zvimiro zvese zvedenderedzwa.
Chimwe chinhu chinonzi gonyonhatu mativi ose ane denderedzwa uye akagadzirwa nemitsara mitatu yakatwasuka.
Nepo izvi zvichipokana nepfungwa dzemazuva ese, rombo rakanaka chokwadi hachitamba kune ruzha rwepfungwa dzedu. Dai zvisina kudaro, tingadai tisipo.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 na20:XNUMX
Handifungi kuti mufananidzo wawatsanangura unoratidza kuti tsika dzechitendero dzinomanikidzwa kuna Mwari. Nekuda kwekuve zvaari, iye pachake ane masimba anogona kuona kuti mamwe maitiro echitendero (aakasika) akakosha zvakakwana kuti arambe maitiro ehunhu. Idi rekuti hunhu hunosunga hazvireve kuti ivo ndivo vekutanga murondedzero yezvakakosha.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 na23:XNUMX
Zvinoita sekuti hauna kunzwisisa nharo yangu (kana yaTirgitz). Tichifunga kuti tsika dzechitendero dziri mumaoko ake zvichireva kuti anogona kuzvisarudzira sezvaanoda, hapana chikonzero munyika chekusarudza kukosha kwechitendero kunopesana nehunhu. Neiko achiita ikoku kana iye achigona kuziva ukoshi hworudzidziso nenzira inokodzera tsika? Zvinotevera kuti tsika dzechitendero hazvisi mumaoko ake.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/15 na55:XNUMX
Kana zvakadaro handina kunyatsonzwisisa kare, asi kunyange izvo hazviuye mupfungwa mumaonero angu, nezvikonzero zviviri:
1. Zvingave zvisingabviri kuumba hurongwa hwechitendero hunonyatsoenderana netsika (sekutaura kwako pamusoro pekusikwa kwenyika isina uipi). Izvi hazvirevi kuti anomanikidzwa paari, sezvo achigona kuzvirega zvachose, kusiyana nemamiriro ezvinhu ane tsika. Asi achifunga kuti anoda imwe nokuda kwechimwe chikonzero, inofanira kupesana nedzimwe tsika dzetsika. Angangodaro akasarudza iyo inoitika zvishoma, uye izvi zvakare zvinotsanangura kukosha kwakakosha pakati peTorah tsika uye tsika.
2. Mwari anogona kuripa, munyika ino kana kuti inotevera, munhu upi noupi anokuvadzwa mutsika nemhaka yokuvapo kwoukoshi hweTorah. Anogona kuva nechokwadi chokuti muchidimbu chose mwero wake womufaro uchava sezvawaifanira kuva usina ukoshi hweTorah.
C. Bader B. 05 - 03/2022/19 na36:XNUMX
1. Saka zvinoreva kuti zvinomanikidzwa paari. Kana akaisa hurongwa sezvaanoda hapana chinomumanikidza zvino chii chinotadzisa kuenderana nehunhu?
2. Kuti anogona kutsiva shanduko inogona kunge iri yechokwadi. Asi hapana chikonzero munyika chekudaro. Anogona kuseta aya hunhu kuti aenderane nehunhu.
C. Bader B. 05 - 03/2022/19 na52:XNUMX
1. Anogadza hurongwa sezvaanoda, asi izvi hazvirevi kuti pane nzvimbo yezvinobvira hurongwa hwetsika dzechitendero ne0 kukanganisa kwetsika. Haakwanisi kumisa chitendero chipi zvacho, kana kusarudza kubva kune izvo zvinokuvadza tsika zvishoma.
Sezvo aikwanisa kusarudza kusasika nyika, asi (zvichida) aisakwanisa kusika nyika ine zvese zvakanaka zvenyika ino asi ine 0 zvakaipa. Izvi hazvirevi kuti kusikwa kwenyika kunomanikidzwa paari, asi kuti kana achida (!) Kusika nyika ine sarudzo yakasununguka ipapo pachavawo nehuipi mairi.
C. Bader B. 05 - 03/2022/20 na32:XNUMX
Usanzwisisa kuomerera uku.
Kana pasina chirambidzo chisingatsamiri paari, chii chinomudzivisa kusasarudza kuti mudzimai Cohen akabatwa chibharo anofanira kuparadzaniswa nomurume wake? Aigona kusarudza zvakapesana (tipei Torah pasina tsanangudzo iyi). Chii chinomutadzisa kuita kudaro? Muchirevo chezvakaipa, ndakatsanangura kuti mitemo yakaoma yezvakasikwa inogona kunge isipo pasina pfungwa dzekutambura uye uipi. Hakuna imwe system. Asi gadziriro dzemitemo yechitendero hadzina ganhuriro padziri. Hadzina musoro. Saka chii mumamiriro echitendero chinomutadzisa kusarudza mirairo gumi nemana chete pasina mudzimai waCohen?
C. Bader B. 05 - 03/2022/20 na34:XNUMX
Rabbi Narali, iwe unofanirwa kunyora koramu (kana iwe wakanyora uye ini handizvizive)
Nezve chikamu che halakhah chakasungwa neicho chaicho pamwe nekubvumidzwa uye kurambwa, nezvimwe.
C. Bader B. 05 - 03/2022/20 na45:XNUMX
Handina kunzwisisa chikumbiro chacho
C. Bader B. 06 - 03/2022/15 na24:XNUMX
[Wakaita zvisiri mukundi semukundi. Ndakangonzwa chimwe chinhu chisina kujeka (uye chakabuda mumashoko ako kwandiriwo) uye kwete nenzira yakapinza yawakatsanangura]
Mufananidzo wacho unoratidza kuti hapana misiyano pakati pe halakhah uye tsika kana zvasvika pakukakavadzana, asi shure kwezvose, vanhu vose vanoziva kusiyana uku uye zvakakodzera kutora intuition yavo muhafu. Kunyangwe kana munhu akademba kurasikirwa kwakaitwa kuti havana kuwana mitzvah kana kunzwa kwakakosha kunoenderana nekuvapo kwayo, handisati ndambonzwa munhu achizvidemba kuti aifanira kuenda neLao nekuda kwekurambwa Munyaya yeMadin, pane kurambwa kwakanyanya. , uye iyi inoratidzika seTza'a), uye mutsika, vanhuwo zvavo vanozvidemba kuti vakatyora mutemo wetsika, sekurega kununura mukosher gentile paShabbat.
Saka wakazvitsanangura uine dzidziso yekuti mu halakhah Mwari varikugadzirisa zvakakuvara pamweya uye muhunhu havasi kugadzirisa zvakakuvara. Asi rinopindura sei, zvino kana pasina chinodiwa chetsika saka vanhu vane hanya nekukuvara kwemuviri? Ivo (uye iniwo zvangu) vakangokanganisa uye hapana kusawirirana kunowanzoitika asi kungonzwa kusaziva?
Kutsanangura munhu anofanira kuwedzera pachena kuti kusvikira mirairo yasara uye kunyange kana yarambwa ipapo murairo mumwe nomumwe unoramba uripo. Izvi zvinoreva kuti murairo hausi murayiridzo unoshanda "zvino itai saizvozvo" asi murairo wenheyo, uye panzvimbo yekurwisana pane chaizvoizvo murairo pano uye murairo pano uye naizvozvowo panzvimbo yekurwisana uye chisarudzo chakajeka pane dambudziko. (Kunze kwekunge zviri pachena kuti hapana chikonzero chekusvika zvachose pazvinhu zvakasiyana zvemweya).
Uye izvi ndizvo chaizvo zvinotaurwa naRaqa (zvechokwadi zvakanyorwa mukuda uye kuvandudzwa mudanidziro yemhemberero sezvamakanditaurira. Handina kudzidza nezvemushandirapamwe asi ndakaona chete kuti anoti kana mumwe munhu akaridza shofar paRosh Hashanah inowira paShabbat Chokwadi asi musimboti. Ini zvirokwazvo handisi kunzwisisa chinhu ichi, unganditsanangurira here? (Mumhinduro imomo wakanyora kuti unonyatsofunga kudaro). Uyu murairo murairo unoshanda, handioni chero zvazvinoreva pakutaura kuti kune rumwe rutivi ndinoraira A uye kune rumwe rutivi ndinoraira B uye chaizvoizvo ndinorayira B.
C. Bader B. 06 - 03/2022/16 na04:XNUMX
Usanzwisise kuti sei usingaone kusuwa kwekurasikirwa nemitzvah. Chokwadi ndezvako. Semunhu asiri vamwene nekuti anorwara. Uye nyaya dzinozivikanwa pamusoro pavanarabhi vanomusimbisa uye vanomuudza kuti ibasa rake mumamiriro ake ezvinhu. Kupfuura izvozvo, mukuita zvinosemesa lao inguva yakajairika uye vanhu vajaira. Semuenzaniso mumucheka wemvere dzemakwai nerineni, hapana anoyeuka kuti kune shatnaz. Asi mumurwere muUSSR ndeye isingawanzo mamiriro uye saka urombo.
Chokwadi vanhu vane hanya nokukuvadzwa kwomuviri uye nhamo yevamwe. Ndezvei kuti ndaita nemazvo. Uye kuti kana munhu achitambura nekuda kwenjodzi dzinongoitika dzoga handizvidembi. Saka kana ndine mhosva pazviri (kunyangwe zvirizvo) ndine chokwadi chekuti ndine urombo. Fuck Hezi vanhu mutsaona vasina mhosva pairi, uye kunyangwe kukuvadzwa pachayo ndiko kukonzeresa, kusuruvara kwakadini kwavakaita nekuda kwekukuvadza kwavakaita.
Ini handichayeuki mazwi angu aunotora kuti murairo uripo, asi ndakanyora nezvawo zvakanyanya mubhuku rechitatu muTalmudic logic series. Rose rimene rebhuku racho rakatsaurirwa kumusiyano pakati pomurairo nokudzidzisa kunoshanda. Murairo rudzi rwechokwadi, uye murayiridzo unoshanda unongobva pauri. Chokwadi halakhic chaizvo. Wangondiyeuchidza izvozvo.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/18 pa 01:XNUMX
The "quote" kubva mumashoko ako yaive mumhinduro mu thread apo pandakaedza kugumisa kubva kuRAKA kuti murairo hausi shoko raMwari chete (kana shoko raMwari risiri re mitzvah mumamiriro ezvinhu apo Mwari pakupedzisira vanorayira. kwete kuita uye kunyange kurambidza kuita). Uye iwe wakapindura, "Ndinobvumirana nekuongorora kunoona hwaro mukuona kwe mitzvos semhando yechokwadi uye kwete kuvapo kweshoko raMwari." Ndinogona kunge ndisina kunzwisisa chinangwa chako ipapo, asi mumaziso angu mazwi eRAA haasati anyatsonzwisisa. Kana mukandibatsira kunzwisisa pfungwa iyi ndingatenda zvikuru.
Kana zviri zvekuchema, zvinoratidzika kwandiri kuti pane musiyano pakati pekukanganisa kwevanhu kunze kwetsika (chinyakare kupesana nehalakhic kubva mumabhuku) uye nheyo chaiyo, nokuti vane urombo chete nokuda kwekusatsika pazvitsitsinho zvavo uye kwete urombo nemucheka. negudo nyangwe vakarangarirwa. Asi ndinotaura pfungwa iyoyo.
Uye chinhu chikuru - kana hunhu huchisunga chete nekuda kwechinodikanwa ipapo pane kupesana kwetsika kunofanirwa hapana shred yenormative dambudziko kunyangwe kukuvadza chiuru chinokuvadza. Ndeipi mhinduro kune chokwadi chekuti vanhu vanonzwa kupokana uye zvakare kuitenderedza pamberi paMwari sezvawakatsanangura muchikamu? Mhinduro yako iri sekunzwisisa kwandinoita kuti iko kukanganisa uye zvechokwadi hapana dambudziko rekukuvadza kana Mwari vabvisa murairo wavo wehunhu kuti varege kukuvadza. Uye dzidziso yokugadzirisa zvinenge zvakuvadzwa pakunamata kana kusagadzirisa zvinenge zvakuvadzwa mumuviri inongoitirwa kutsanangura manzwiro evanhu kwete kuapembedza. ndizvo here?
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/19 pa 52:XNUMX
Izvi zvinogona kunzwisiswa kuburikidza nezano rangu pamusoro pezvakanaka zvemweya. Izvi zvinomira pachena kunyange ndisingasungirwi kuita basa rinovaunza. Asi chokwadi kubatsirwa chete hakuna kukwana kutsanangura mitzvah. Nedimikira ndingati murairo uripowo nekusingaperi. Asi dzimwe nguva inofanira kupfuudzwa nekuda kwemumwe murairo.
Muenzaniso wechinhu chaakaita ndechekuti nguva yakakonzera vakadzi. Mvumo yevanenge vese vanogadzirisa kuti kune kukosha mukuzviita, uye vazhinji vavo vanotozviona se existential mitzvah (Rabbi Brish zvinoreva kuti Safra anonyora kuti inoramba kwete). Asi maererano nomurayiro waMwari vakadzi vakasunungurwa. Haufanire kuita izvi, saka ndeipi mitzvah iripo kana vakaita zvakadaro?
Ndinofunga kuti pane chinetso chenormative chekukuvadza uye kusuruvara ndekwechokwadi uye kwete mupfungwa chete. Kukuvadza Kwetsika Kusiyana Nezvokunamata Mwari haabvise kunyange kana wakaita zvawaida.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 pa 15:XNUMX
Dimikira rekuti murairo uripo nekusingaperi asi unofanira kudarika rinoratidza dambudziko. Izvi zvinogoneka kana bviro yekurwiswa ichibva kuzvinhu zvemweya zvisingatauri mukona uye zvisingaite sezvisingagoneki kana mitzvah ari munhu akangwara anofanira kundiudza zvaanoda kuti ndiite. Mukuita izvi, unofananidza murairo wesimba nehwamanda muna Mwari paSabbat, apo Mwari vanondirambidza kuridza (vanondirayira kuteerera vachenjeri. Ndinobvuma kuti zvakaoma kutsanangura kupatsanurwa, asi kana zvisina kudaro zvinoita sezviripo. Kutaura kuti ndiri kuita mirairo yaMwari ini ndichimupandukira uye ndichiridza shofa zvisinei nemeso ake anobwinya zvisinei nekurambidzwa chinhu chinoshamisa. MM Kana zvakadaro achafungisisa nezvazvo (by the way inonakidza kuenzanisa kune inotevera mitzvah mukukanganisa uye nhaurirano yawaunza pana R. Asher Weiss, ndichafungisisawo pamusoro peizvi. Uye nyama yenguruve inomedzwa mairi. nenzira inorambidza kubva kuDauriyta pamwe zvakare Raqa anobvuma kuti hapana murairo wekudya)
Ndakanga ndisinganzwisisi kuti nderipi dambudziko retsika rinofanira kukuvadzwa kana munyaya iyi pasina murairo wakabva kuna Mwari unorambidza kukuvadza kwakananga uku. Mune mamwe mazwi, iwe unoreva kuti kunyangwe muhunhu hwemurairo wekuti usakuvadza unoramba uripo asi unofanirwa kupfuudzwa. Kana murairo uri chinhu chakangwara chinoziva zvese uye chinosarudza zvekuita nechikwata saka nyaya iyi haionekwe neni sepamusoro. Sezvakataurwa ndichafungisisa izvi, pamwe ndakatambura ne square analytism.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 pa 41:XNUMX
Pamusoro pekurambidzwa kweDauriyta uye mitzvah, muenzaniso uri nani wechibayiro chakaitwa chakapambwa (chero chikafu chiri muchirambidzo sechikafu chinoramba chiripo uye pasina mitzvah kana panewo mitzvah uye zvakare wakapara mhosva) idambudziko remwanasikana. kuhama. Beit Hillel anorambidza uye mwana bastard. Zvinogoneka here kuti semaonero avo, kunyangwe avo vanochema dambudziko remwanasikana vanozadzisa mitzvah yekuchema?! (Zvinokwanisika kupatsanura pakati pemitemo mukati memitzvah uye pakati pemitemo mumitzvos yakasiyana. Asi pfungwa yose ndeyokuti inoratidzika kwandiri yakafanana chaizvo)
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/22 pa 55:XNUMX
Pane chokwadi chemweya, sezvandanyora muchikamu. Asi ivo havana chokwadi kunze kwekunge paine dare rinovagadza uye / kana kuvaraira.
Hapana mutsauko munyaya yedu pakati pekurambidza uye kusava nechisungo. Iwe pachako unozvibvuma, wobva waita kuti zviome. Ndinoshamiswa!
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/01 pa 01:XNUMX
Iwe unofunga kuti chii chinoita pakutanga, kuti mazwi aRaqa zvakare mune chero lau Dauriyta isingarambwe nekuda kwechimwe chiito kana paine chiito uye yakadarika lao akakunda mitzvah uye akabuda kunze kwebasa, kana mazwi ake. murambidzo yekuDurban chete inodzima Dauriyta mitzvah?
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/07 pa 14:XNUMX
Hapana chikonzero chekufunga uye kungwara kutanga. Zvinoita sekuti pane humbowo hweizvi kubva mukuti inotevera mitzvah mukukanganisa haina kushanda. Uye atove wekutanga akasimbirira pamusiyano pakati pemutemo uyu uye akaita zvinosemesa kwete. Chero zvazvingava, muzviitiko zvakawanda, kana mutemo usina kurambwa nokuda kwechimwe chikonzero (somuenzaniso, hausi panguva imwe chete), iyo ndiyo mamiriro eDare Repamusorosoro.
Mune maonero ako, hapana chikonzero chevhesi yeizvi, sezvo mamiriro acho pachawo asina kukosha kune mitzvah yakadaro. Asi Gemara anodzidza izvi kubva kune "anovenga gororo rinokwira." Uyezve, maererano naThos.
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/10 pa 29:XNUMX
Ndakataura pamusoro apa pamusoro pemitzvah inotevera mukukanganisa asi ndakangofunga nezvemuenzaniso wesukkah yakapambwa apo chiito chemitzvah chisiri chigumbuso (uye pane nhaurirano yako pamashoko aR. Asher Weiss naEzal). Zvino ndakaona muWikipedia muenzaniso wekudya matzah yakanyikwa muPesach uye vachiti ipapo (handina kutarisa kwakabva) kuti havaendi munzira yavo yekuita matzah uye havacherechedze matzah matzah. Uye izvi zvinopupurira sezvaunotaura (zvichida chete kana aripo kana asina imwe matzah uye saka zviri pachena kuti Mwari vanomurambidza kudya matzah erubhabhatidzo).
Pasina vhesi taisazoziva chiri kuwedzera, ndiko kuti, izvo Mwari anoraira chaizvoizvo, zvichida mu matzah akanyikwa anorayira hungu kudya kana pasina imwe matzah. Ini handizivi nyaya yacho asi kubira mune anonzi mutorwa Chitsva chiri kunyangwe mushure mekunge gororo ratenga uye mutorwa wake nekuda kwezvinangwa zvese uye anobvumidzwa kuidya nekuda kwechido haasati akakodzera paatari. [Kunze kwaizvozvo, pfungwa yekuratidza kuti neimwe nzira "hapana chikonzero chevhesi" haina chokwadi uye kunyanya kana tichitarisa chikamu chevhesi inodzidzisa zvakapesana, nekuti isu tine pfungwa pano nepapo uye ndinobvuma hangu. kuti RAKA akataura mashoko ake and you even think his words is acceptable ndaita problem kufunga kuti unoda verse kuti ubude mutsananguro iyi]
Chero zvazvingava, ngatiti sezvaunotaura zvinobuda kuti ani naani anodya matzah akanyikwa haacherechedzi murairo we matzah zvachose uye akaputsa kurambidzwa kwekunyura. Asi ani nani airidza hwamanda muU.S. neShabbat nokuda kwaYa'akov akanga ane murayiro wokuridza uye akapfuura nomuShabbat Durban.
Izvi zvinoreva kuti mumitemo yekurambwa mukati meTorah mitzvah "pachacho" inotsanangurwa chete pamamiriro ezvinhu asina kurambwa. Asi mumitemo yekurambwa kubva kuDurban mitzvah Dauriyta "inosara" kunze kwekuti chokwadi inorambidzwa kuichengeta uye sedimikira rekuti murairo uripo nekusingaperi asi dzimwe nguva unofanirwa kutyorwa.
10 Adar 03, 2022 - 14/56/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Kana iri fungidziro yako yekuti mutemo wechitendero, kana hunhu hwawo hwepasi, hunobva pachokwadi chakazvimirira chakatemerwa kuna Mwari - zvinoratidzika kwandiri kuti pachinzvimbo chekuvandudza chimwe chikamu chinosunga Mwari, zvinokonzeresa matambudziko ezvidzidzo zvebhaibheri, izvi zvinogona kuiswa papfungwa ye kudiwa kukuru kwekudzidziswa kwevanhu. Kuti vawedzere kudzidziswa uye kusarudzwa kwevanhu, "Mwari ane Tora uye mitzvos yakawanda" kwavari, kunyange avo vanopikisana netsika. Ndinoyeuka iwe wakanyora mune imwe yemakoramu kuti ndiko chaizvo kuwanda kwehunhu hunopa zvakanyanya chirevo kune sarudzo, sezvo paine zvimwe zvinogoneka musanganiswa pakati pezvakakosha.
H. Bader B. H. 10 - 03/2022/16 na30:XNUMX
Yandinoti kukosha kwechitendero munoti kudzidziswa kwevanhu. Saka zvakasiyana sei? Unoreva here kutaura kuti hapana zvinangwa zvachose muchinhu kunze kwekupedzisa kwemurume? Izvi zvinotevera kuti mitemo yose inopokana zvachose (angadai akasarudza mamwe uye kunyange mitemo yakapesana). Asi ipapo nharo yaTirgitz inodzoka, nei paine nyaya dzaakatonga zvinopesana nehunhu.
H. Bader B. H. 10 - 03/2022/22 na07:XNUMX
Iwe unonyora kuti tsika dzechitendero dzinomanikidzwa kuna Mwari, asi zvakadaro kana paine kupesana pakati petsika dzechitendero zvinoita chishamiso uye zvinodzivirira kukanganisa kwechitendero kunokonzerwa nekuita zvekare. Kana ndisina kunzwisisa kuti tsika dzechitendero dzinomanikidzwa sei paari - saka anogona kudzibvisa chero paanoda. Uye kana asingadi kuvhiringidza zvisikwa (kunyange zvechitendero), nei achipindira mumamiriro ezvinhu ekupesana pakati petsika dzechitendero?
H. Bader B. H. 11 - 03/2022/01 na53:XNUMX
Haamanikidzwi kudaro. Kumanikidzwa paari kuti uku ndiko kukosha. Kunyangwe muhunhu haamanikidzwe kudaro asi kungoti iyi ndiyo tsanangudzo yezvakanaka.
Nezve zvawanyora pano”
"Kunyangwe pakufunga kumwe kunogona kupokana kuti kana ndakaita chimwe chinhu chakabvumidzwa ipapo kukanganisa kwemweya kwakadziviswawo. Zvinogona kunzi Mwari anoita chishamiso uye anodzivirira kukanganisa kuitira kuti parege kuva nechakaipa nemunhu akarurama seni akatendeka kumutemo. ”
Kana zvakadaro, nei aisazoita zvishamiso nguva dzose kuti adzivise kukuvadzwa kwose kwomudzimu kunoitwa nevanhu, vangave vachiita chimwe chinhu chinobvumirwa kana kuti kwete?
20 Adar 03, 2022/19/24 paXNUMX:XNUMX
Nemhaka yokuti ane fariro yokuti mugumo wenyika uchatsamira pazviito zvedu. Zvakafanana nekubvunza kuti sei uchitipa sarudzo uye kwete kutiita kuti tigare tichiita zvakanaka pasina sarudzo (uye kwete kutisika zvachose).
20 Adar 03, 2022/19/41 paXNUMX:XNUMX
The world will depend on our actions, only the spiritual damage is not depend on our actions, nekuti ikoko sekutaura kwawanyora kunoita kupindira. Uye kupfuura ipapo, kana Mwari achida kuti kukuvadzwa kwomudzimu kutsamirewo pazviito zvedu, ipapoka neiko muchinoitika chomumwe munhu akaita chimwe chinhu achibvumirwa kupindira kudzivisa kuvadziko yomudzimu? Mushure mezvose, zvipfeko zvemutemo wake kuti nyika ichatsamira pane zvatinoita.
20 Adar 03, 2022/23/28 paXNUMX:XNUMX
Zvinoenderana nemaitiro edu zvinoenderana nekuti taita chinhu chinotenderwa here kana chinorambidzwa.
Nezve zvawakanyora mundima iyi:
“Ndichatsanangura mubvunzo wake. Mukuwirirana nomutoo wangu, Mwari anotirayira kuva nemipimo inorwisana netsika kuti tisimudzire mipimo yorudzidziso. Kana zvakadaro, Tirgitz anopikisa, zvinoita sekunge tsika dzechitendero dzinomanikidzwawo paari uye hazvisi mhedzisiro yekuda kwake kwechipo (mutemo wake wekutonga). Dai mirairo yanga isiri “halakhic chokwadi” yaisirwa pana Mwari asi yakasikwa nemutemo Wake, saka angadai akaigadza zvakasiyana. Mumamiriro ezvinhu akadaro ndingatarisira kuti kana achida (uye akagara nhaka) kuita zvakanaka aisazodzika mitemo inopikisana nehunhu. Kuvapo kwekukakavadzana kunoratidza kuti mitemo ye halakhah (kana tsika dzechitendero, iyo mitemo yakafanana ye halakhah inosimudzira) inomanikidzwawo kuna Mwari, uye naizvozvo anobatwa (kana kuti anotidheerera) kunze kwekukosha kune izvi. "
Zvinoreva kubva mumashoko ako kuti mitzvos yese nemitemo yeHalacha inomanikidzwa kuna Gd, asi kubva mukupokana kwako izvi zvinogona kutorwa chete maererano nemitemo uye mitzvos inopesana nehunhu. Murairo wakaita sekudzokorora Shema haumiri mukupesana nehunhu uye saka hazvifanirwe kuti umanikidzirwe pana Gd kana kuti ichokwadi halakhic.
Kupfuura izvozvo, zvinobvira kuti kunyange mumamiriro ezvinhu apo Mwari anorayira chimwe chinhu chinoratidzika kuva choutere, kunenge kuri kudzivisa kusaruramisira kukuru kwetsika. Somuenzaniso, nyaya yevanyajambwa. Sezviri pachena Mwari anorayira kuuraya mhuka pasina chikonzero. Asi zvinogoneka kuti dai pasina murairo uyu, vanhu vangadai vakaramba zvachose chinamato nekuti chingadai chisina chinhu chakakosha muhupenyu hwechitendero chakatangira kupihwa kweTorah. Ndiko kuti, kuchinjirwa kuchitendero chechiJudha kwakanga kwakanyanyisa uye kungadai kwakaisa pangozi iyi shanduko kuti irege kuitika.
Mukuwedzera, kunobvira kuti Mwari pane dzimwe nguva anoisa kuda Kwake pakutanga (izvo zvisingamanikidzwi paari) sechimwe chinhu chinokosha zvikuru kupfuura kukuvadza mutsika kuzvisikwa Zvake. Somuenzaniso, ngatitorei chido chaMwari chokupiwa mubayiro. Kana nokuda kweichi chinangwa pane dzimwe nguva achifanira kukuvadza mumwe munhu wezvisikwa zvake, angava anodisa kuita kudaro kusimudzira chishuvo ichocho, uye kunyange zvazvo iye angagona kurega chishuvo ichocho pane imwe nguva, anochiisa pokutanga sechimwe chinhu chinokosha zvikuru kupfuura kuvadziko yetsika. . Ndiko kuti, zvinogoneka kuti kunyangwe mirairo inopesana nehunhu haimanikidzwe paari uye haisi chokwadi che halakhic, uye zvakadaro anosarudza kuiraira nekuti yakakosha kwaari kupfuura kukuvadzwa kwetsika. Uye kana iwe ukataura kuti iyi isarudzo yeunzenza uye inopesana nekufungidzira kuti Mwari ane tsika nguva dzose, ini ndichapindura kuti Mwari anofanirawo kuva netsika kwaari pachake. Ndiko kuti, paanosiya kuda kwake, pane kukuvadzwa kwaari (rudzi rwekufunga nezvehupenyu hwako hwakatangira).
20 Adar 03, 2022/19/27 paXNUMX:XNUMX
Chokwadi, gakava racho rinobata chete nemitemo inopesana netsika.
Kana vari vafirwa handina kunzwisisa mubvunzo wacho. Iwe unopa zvizere tsananguro yemirairo yezvibayiro. Zvakanaka. Uye kana iwe uchireva kuti iyi itsananguro isina kunanga yetsika, mukuona kwangu hazvigoneke.
Kana ukataura kuti chimwe chinhu chiri nani mumeso ake, zvinoreva kuti ane chinangwa chaicho chisiri mugumisiro wekuda kwaMwari chete.
20 Adar 03, 2022/19/47 paXNUMX:XNUMX
Kana zviri zvezvibayiro, ndaireva kuti kune mirairo inoratidzika kwatiri inopikisa tsika, asi chaizvoizvo mukudzika kwayo inosimudzira hunhu. Isu hatinzwisisi kuti sei kana kuti sei asi panogona kunge paine tsananguro yakadzama kuseri kwavo iyo inobatsira mukusimudzirwa kwehunhu (haisi yese mirairo inopikisa tsika ndizvozvo, asi zvimwe zvacho zvingadaro).
Kana zviri zvekutanga mumeso ake, ndinoreva zvishuwo zve "pachedu" nezvishuwo zvaMwari. Ndiko kuti, kwete chinhu chinomanikidzirwa paari kubva kunze, asi chido chake chemukati. Handina chokwadi chekuti izwi rekuti kupokana rakakodzera pano maererano nekuda kwaMwari. Kungofanana nechishuwo chemumwe munhu chekuve mutambi we chess akazivikanwa hachidanwe chishuwo chekupokana (uye hachimanikidzwe paari kubva kunze). Chishuvo chomunhu oga. Zvichida Mwari anoda "kuva mutambi wechess akavimbiswa" mune imwe nzvimbo, uye nokuda kweizvozvo anoda kupira kukuvadza kwetsika kune vamwe vanhu dzimwe nguva.
20 Adar 03, 2022/23/31 paXNUMX:XNUMX
Zvakandiomera kuti ndikurukure nezveunhu uye zvido zvaMwari.
21 Adar 03, 2022/00/19 paXNUMX:XNUMX
Handisi kutaura nezvevanhu vanotyisidzirwa pachavo. Ndinoti kungave nekumwe kuda kwaGd, kuti kunyangwe kusingamanikidzwe paari kubva kunze (chokwadi halakhic), kuchiri kukosha kwaari kupfuura kukuvadzwa kwehunhu kuzvisikwa zvake, uye naizvozvo anoraira.
21 Adar 03, 2022/07/03 paXNUMX:XNUMX
Kana zvisingamanikidzwe paari uye pasina chinangwa chekuzviraira saka isarudzo yake isina musoro, uye draa kushya kune duchy. Pamwe zvinopokana kana kuti zvinomanikidzwa (mupfungwa yekuti tsika dzinomanikidzirwa patiri. Kutendeseka kwavo kunomanikidzwa, kwete maitiro maererano navo). Handioni chetatu chingangoitika.
21 Adar 03, 2022/11/28 paXNUMX:XNUMX
Ko munhu anoda kuve ane certified chess player chishuwo chake chekupokana here? Kana kuti zvinomanikidzirwa paari?
21 Adar 03, 2022/12/39 paXNUMX:XNUMX
Kungoita zvehumbimbindoga. Kana zviri zvemasikirwo zvinomanikidzwa paari.
21 Adar 03, 2022/14/56 paXNUMX:XNUMX
Pane nyaya yechakavanzika chebasa chinodiwa zvakanyanya uye chishuwo chaMwari chekuripa. Mune zvose zviri zviviri, Mwari vanoda kuti tibudirire pazvinangwa izvi. Zvinogoneka kuti kuti zvinangwa izvi zvizadziswe hapana kupukunyuka kubva mukukuvadza tsika kune mumwe munhu. Sezvinongoita vanhu vanoedza mhuka nokuda kwezvinangwa zvokurapa, kunobvira kuti Mwari anotishandisa kunyange kana dzimwe nguva zvichitikuvadza, nokuda kwezvinodikanwa zvake.
21 Adar 03, 2022/14/59 paXNUMX:XNUMX
AHN. Saka zvinomanikidzirwa paari. Kupihwa mubairo zvinoreva kuve wakakwana, uye tsananguro yekukwana haisi mumaoko ake.
21 Adar 03, 2022/15/41 paXNUMX:XNUMX
Sei zvichange zvisingadzivisiki kumanikidzirwa paari. Anogona kuzvisarudza. Pashure pokurangarira zvose, chinodikanwa chose chokutaura kuti anomanikidzirwa paari chinobva mutsanangudzo yokuti Mwari haasati achizosarudza chinhu chakashata. Asi ini ndapa muenzaniso wekuti pazvinenge zvichidikanwa, vanhu vanosarudzawo chimwe chinhu chisina hunhu nekuda kwavo uye nenzira kwayo (kuedzwa kwekurapa kwemhuka)
21 Adar 03, 2022 - 17/02/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Vanhu vanoita izvi vachimanikidzirwa. Chirwere chinomanikidzirwa pavari uye ndizvo zvakaitawo nzira yekuporesa.
21 Adar 03, 2022 - 17/46/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Vanogona kuita ongororo pavanhu kana kusiya mushonga. Ndiko kuti, hapana kukosha kunodiwa kana chero kukosha chaiko kunomanikidza kuita zviedzo pachikara.
21 Adar 03, 2022 - 18/51/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Pane chokwadi chokuti kuedza kunodiwa kuti udzidze, uye pane chokwadi chetsika chokuti Shabbat inopfuura vanhu.
21 Adar 03, 2022 - 19/43/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Saka sei munhu achifanira kusvika kune halakhic chokwadi chinomanikidzwa kuna Gd. Zvinogona kutaurwa kuti pane chokwadi chetsika chinotaura kuti panzvimbo pokurwisana pakati pezvinodiwa naMwari uye kukanganisa kwetsika kuvanhu, pane chokwadi chetsika chinoti zviri nani kukuvadza vanhu pane kukanganisa zvinodiwa naMwari.
21 Adar 03, 2022 - 19/48/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Zvinodiwa naMwari zvinomanikidzirwawo paari, kana kuti hazvikoshi uye hazvipembedzi kurambwa kwetsika.
Mukuona kwangu hapana nzira yekubuda nayo iyi: ingave yekumanikidzirwa kana yekupokana. Uye kuita zvechimbichimbi hakurambi tsika. Pese paunouya uchibva kwakasiyana asi mhinduro ndiyo imwe chete. Gumbeze ipfupi, unogona kuvhara makumbo kana musoro asi kwete zvese.
21 Adar 03, 2022 - 20/13/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Zvakanaka, asi kudikanwa hakusi kwechokwadi halakhic. Kubva pane zvandinonzwisisa kubva kwauri halakhic kana chokwadi chetsika ichokwadi munzvimbo yezvinofanirwa uye kwete izvo.
21 Adar 03, 2022 - 20/54/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Hazvina basa. Pachine zvinhu zvinomanikidzirwa paari. Asi kunze kweizvozvo, ichi chinodiwa ichokwadi chinogadzira OUGHT. Nharo ndeyokuti mitemo inomanikidzwa paari setsika dzetsika. Kwandiri hazviite sezvisina kukosha kunyangwe kuri kumanikidza kuburikidza nezvokwadi uye zvinodiwa kana zvakananga. Ndichiri kufunga kuti aya maitiro, asi nei zvakakosha?!
21 Adar 03, 2022 - 21/07/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Izvi ndizvo zvandakamboita nharo mumhinduro kare. Kuti chokwadi cheichi chinodiwa chinogadzira chinofanirwa, asi chinofanirwa kubva munzvimbo yehutsika uye kwete kubva munzvimbo ye halakhic kana neimwe nzira. Sezvakangoita kuedza pamhuka kwete pavanhu kunofanira kuva netsika uye handina kuenda.
21 Adar 03, 2022 - 21/12/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Kwete hazvo tsika. Zvimwe zvinoda kana kukosha, zvine tsika kana kwete. Somuenzaniso, kurovedzwa kwaMwari hakusi kudiwa kwetsika mupfungwa yakajairika. Kunyange kurambidzwa kudya nyama yenguruve hakuiti sechiratidzo chechokwadi chetsika.
21 Adar 03, 2022 - 21/19/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Zvandaireva ndezvekuti Mwari anoraira mirairo inopikisa hunhu kubva pane chimwe chidikanwi chiri maAri. Asi asati araira anenge ari parumananzombe kuti otanga zvaanoda here, kana kuti adzivise kukanganisa hunhu kuvanhu. Dambudziko iri riri munharaunda yetsika. Kungofanana nedambudziko rekuti kuita zviedzo pavanhu kana mhuka riri munharaunda yetsika.
21 Adar 03, 2022 - 21/32/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Saka pane kukosha kwechitendero (icho chaunosarudza kudana chinodiwa) chinomanikidzwa pairi, uye chete sarudzo mudambudziko pakati payo uye tsika isarudzo yehutsika. Ngatiti iwe wakarurama, zvino chii? Nharo iripi? Kupfuura izvozvo, mukuona kwangu chisarudzo pakati pechitendero chinokosha kana kuti chinodikanwa noukoshi hwetsika pachacho hachisi patsika.
22 Adar 03, 2022 - 10/57/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Sekuziva kwangu, Rabbi Michi anoti:
A. Mwari anoda zvakanaka nokuti akanaka
B. Kurongeka kwechitendero hakuna kufanana nehurongwa hwetsika
chetatu. Murwisano pakati penhevedzano yorudzidziso nenhevedzano yetsika, nhevedzano yetsika padzimwe nguva inofanira kusarudzwa
Wadii kutaura kuti kukakavara kunongova kwekufungidzira (sekusvika kwaRabhi Lichtenstein uye mukuda kwemaitiro aripo mumatunhu echitendero)?
D. Ndiko kunzwisisa kwangu kuti zvinototevera kuti hurongwa hwechitendero hunomanikidzwa kuna Mwari zvakare, zvikasadaro nei achiraira zvinopesana nehunhu?
Chinosarira kunzwisiswa ndechokuti nei tichibvumirwa kusarudza nhevedzano yetsika muchinoitika cherwisano, sezvo Mwari akasarudza nhevedzano yorudzidziso murwisano iyoyo?
Mhinduro inogoneka ndeyokuti hurongwa hwechitendero hwakapihwa naMwari, asi kubvira ipapo hwaoma pakurinda kwake, uye tinofunga kuti muchokwadi chakapihwa akange asiri mitzvah, saka saka sarudza kurongeka kwehunhu.
Zvose izvi maererano nenzira yeunyanzvi hwemwanakomana wedu, Ramad Shlita, akatendeka kune nzira yake iyo isingazivi kusarudzwa kwekuda kwaMwari (uye ona sayenzi yekusununguka). Uye doc uye il.
22 Adar 03, 2022 - 14/06/XNUMX naXNUMX:XNUMX
Dai waizoverenga mashoko enyanzvi yesimba rako waiona kuti ndinonyora kuti hatibvumirwi, chaizvo nekuti iye pachake akatosarudza. Naizvozvo hapana chikonzero chekutsvaka mhinduro.
Pana Adar 23, 03 - 2022/14/16 naXNUMX:XNUMX
Izvi zvinoreva kuti hapana kuzivikanwa pakati peHalakhah nehunhu.  Aya ndiwo mapoka maviri ari musimboti akazvimirira (kunyangwe pasina nguva dzose kupokana pakati pawo hongu). Kuona kuti chiito chine hunhu here kana kuti kwete, uye kutonga kuti zvinotenderwa here kana kuti zvinorambidzwa halakhically mitongo miviri yakasiyana uye inenge yakazvimirira. The halakhic uye tsika chikamu mapoka maviri akasiyana. Zvechokwadi mumamiriro ezvinhu apo pane kupesana pakati pekudzidzisa kwetsika uye halakhic zvino inofanira kusarudzwa neimwe nzira (uye izvi hazvisi nguva dzose zvinotsigira halakhic), asi kuvapo kwekukonana hakusi dambudziko pacharo. Kune makakatanwa akadai zvakare pakati pehunhu huviri hwetsika (semumuenzaniso wekuponesa hupenyu nekukonzeresa marwadzo), uye hapana kuramba kuti pachavawo nehalakhic kukosha uye kukosha kwetsika.
Quote from column 15. uye matauriro ako pamusoro pengochani muhurukuro neLondon. Havasi vadzidzisi avo dzimwe nguva vasingachengeti nhevedzano yorudzidziso here? Munganditsanangurirawo musiyano wacho here?
Pana Adar 23, 03 - 2022/14/43 naXNUMX:XNUMX
Ndakabata neizvi pakutanga kwebhuku rechitatu mutrilogy. Muchidimbu, kana paine kunetsana kwakanyanya mutemo unogara uchitonga. Somuenzaniso, kubva kumuAmareki. Torah pachayo yairangarira mutengo wetsika asi yakaurayira. Asi kana kupokana kwaitika netsaona, sekudzora pfungwa neShabbat, ipapo hazvibviri kubvisa kubva kumurairo chaiwo weShabbat uyo unoramba Pikun kana zvinopesana. Mumamiriro ezvinhu akadaro unofanira kuzvisarudzira iwe pachako.
Uye izvi zvose kana murayiro wakajeka muTora. Kana iri mhedzisiro yekududzira kana mharidzo saka kupokana kunopinda pano kuti mutemo uyu hauna kururama.
Pana Adar 23, 03 - 2022/14/27 naXNUMX:XNUMX
Ndaiwanzotaura muhurukuro pamusoro pemaitiro akasiyana muchiJudha, kuti maonero ako ndeokuti munyaya iyi tsika dzinofanira kusarudzwa pamusoro peTorah, kusiyana naRabbi Riskin anoita okimata muTorah, uye varabhi vechinyakare vanoita okimata mutsika. Uye tsika yaIsraeri Torah.
Chete, ndinofara chaizvo kuti iwe ujekesa maonero angu. Panyaya yeDaurite halakhah yakajeka iyo inopesana netsika, pane nzvimbo yekusarudza tsika here? Uye zvakadini neHalacha Durban? Ko Okimata yakaitwa muDauriyta halakhah nenzira isingapesani nehunhu, kunyangwe inopesana netsika ye halakhic?
Pana Adar 23, 03 - 2022/14/44 naXNUMX:XNUMX
Ndakajekesa. Kana zviri zvesvikiro hongu zvinogoneka. Masuwo ekududzira akanga asina kukiyiwa.
Mubvunzo usina mhosva. Icho chokwadi chekuti kune hutsika hunoshanda (humwari, semuenzaniso) - tsika iyi yakanyoreswa kupi? Isu tinozvifungira kubva kune yedu intuition kuti kuponda uye kuba hazvifanirwe kubvumidzwa? Ndiko kuti, kana chiri chinhu chakadzidzwa kubva kumunhu intuition kana kubva kumagariro echinyakare magungano, saka haisisiri yekumanikidza munhu asina kugamuchira iyo intuition. Uye kana zvine hukama neimwe nzira neTorah, saka zvakare mutemo weumwari wakanyorwa, uye musiyano uripo pakati peTorah nehunhu?
Zvakanyorwa pahwendefa remwoyo yedu. Murayiro unotidzidzisa uye iwe wakaita zvakanaka uye zvakanaka, asi hautauri kwatiri kuti zvinorevei. Anofunga kuti munhu wose anonzwisisa zvinorehwa nehurongwa hwetsika (hwakanyorwa pahwendefa remwoyo wake). Zviri mutsika zvinodzidzwa kubva mukuziva kwetsika, asi basa rokuitevera rinobva mukuda kwoumwari. Sezvandakatsanangura muchikamu. Kana paine munhu asina intuition iyi munhu anorwara uye hapana chekuita nazvo. Sezvisina basa nebofu risingaoni.
Musiyano uripo pakati pe halakhah nehunhu uri mumurairo. Mitemo iri muTorah inobata chete neHalacha, uye hunhu hausi pasi pemurairo. Kuda kwaMwari pasina murairo uye nokudaro kunoramba kuri kunze kwemutemo. Naizvozvowo zvirimo hazvionekwi muTorah asi mukati medu. Kune rumwe rutivi, muHalacha zviri mukati zvakanyorwawo muTorah. Naizvozvo, “uye makaita zvakarurama nezvakanaka” hazvina kubatanidzwa munhamba yemitzvos mune ipi neipi yechaunga.
Ndiko kuti, pane fungidziro yekuti "kutendeseka nekunaka" chinhu chinonzwisiswa nemunhu wese mune yake yekutanga intuition, ndiko kuti, zvinhu zvatinogamuchira sekuponda uye kubata chibharo, asi iwo mubvunzo mumwe chete wawakabvunza vasingatendi kuti kuna Mwari - ungati kudii nezvazvo. mercenary anofunga basa rake kuuraya. Uchapupu hwekuti kune hurongwa hwekunze hwetsika kumunhu, humwari, asi zvakare, hurongwa uhu hahududziri izvo zvinosanganisirwa mu "kururama nekunaka" kwayo, uye zvakare tichakubvunza iwe zvaungataure nezve mercenary anotenda kuti kuponda ndiko. kururama norunako. Muchidimbu, ndinoda kukwenenzvera dambudziko ripi rauri kugadzirisa nefungidziro yekuti hunhu hunoda Mwari.
Unosanganisa ndege. Ndakabvunza mubvunzo kwete wemunhu asinganzwisise kuti mhondi inorambidzwa asi munhu anonzwisisa kuti inorambidzwa asi asinganzwe kuzvipira kwairi. Uyu mubvunzo wakasiyana zvachose. Uyo asinganzwisise ibofu. Chii chandinofanira kumuudza? Zvinoreva kune mapofu asingaoni chokwadi uye anoramba kuvapo kwemavara semuenzaniso.
Zvandakavabvunza ndezvekuti kwavari tsime rechokwadi chehunhu kwete zvinotaurwa nemirairo yehunhu.
Pasina Mwari iniwo, nekuda kwekunzwa chokwadi chemitemo yehunhu, ndingadai ndisina kusungwa navo. Ini ndaizorasa kunzwa uku sekunyepedzera kunonzwisiswa mandiri kuti haina chokwadi chaicho. Mwari chete ndiye anogona kuhupa huchokwadi.
Ndanzwisisa. Muri kutaura kuti izvo zvinosanganisirwa muhunhu - zvinozivikanwa kumunhu wese, zvakagara matiri kuti humhondi nekubata chibharo hunzenza. Uye iwe zvakare uri kupokana kuti tsika iyi pamusimboti wayo inofanirwa kutambirwa nemunhu wese, zvisinei nekushanduka kwetsika nenguva. Musiyano uripo pakati peasingatendi kuti kuna Mwari nemutendi ndewekuti mutendi anotsanangurawo kuti nei tsika iyi ichimumanikidza. Ndinozvinzwisisa here?
chaizvo saizvozvo. Ndinofunga ndakatsanangura izvi mune zvese zviri muchikamu uye nehurukuro yekutanga.